ဒံယလေက – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / ဒံယလေက
1:1 ယုဒအမျိုးရှင်ဘုရင်ယောယကိမ်နန်းစံသုံးနှစ်တွင်,, ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်အဗုခဒ်နေဇာသည်ယေရုရှလင်ထံသို့ လာ. မြို့ကိုဝိုင်းထား.
1:2 ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်မိမိလက်ယောယကိမ်သို့ယုဒအမျိုးသည်ရှင်ဘုရင်နှင့်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၏တန်ဆာတစ်ဦးသောအဘို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏. ထိုမင်းသည်ရှိနာပြည်သို့သူတို့ကိုပယ်သွား၏သယ်ဆောင်, မိမိဘုရား၏အိမ်သို့, သူသည်မိမိဘုရား၏ဘဏ္ဍာခနျးထဲသို့တန်ဆာကိုဆောင်ခဲ့.
1:3 ထိုအခါရှင်ဘုရင် Ashpenaz သို့ပြောသည်, မိန်းမစိုး၏အကြီးအကဲ, သူသည်ဣသရေလအမျိုး၏သားအချို့အတွက်ဆောင်ကြဉ်းသင့်ကြောင်း, နှင့်အချို့သောရှင်ဘုရင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်၏:
1:4 လုလင်တို့သည်, အဘယ်သူကိုမျှမအပြစ်ရှိသေး, အဆင်းကိုမြင့်မြတ်သော, ရှိသမျှတို့ကိုဉာဏ်ပညာကိုပြည့်စုံ, ပညာအတတ်ကိုသတိထား, ကောင်းစွာပညာတတ်, သူသည်ရှင်ဘုရင်၏နန်းတော်၌ရပ်နိုင်ဘူး, သူကိုသူတို့အားအက္ခရာများနှင့်ခါလဒဲလူများ၏ဘာသာစကားတို့ကိုသွန်သင်ခြင်းငှါဒါကြောင့်.
1:5 ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အသီးအသီးနေ့အဘို့ပြဌာန်းချက်များအဖြစ်ခန့်အပ်, သူ့ကိုယ်ပိုင်အစာကနေကိုယ်တိုင်ကိုသောက်သောစပျစ်ရည်ကနေ, သောကြောင့်, သုံးနှစ်အဘို့မွေးမြူခံရပြီးနောက်, သူတို့သည်ရှင်ဘုရင်ရှေ့တော်၌ရပ်နေလိမ့်မယ်.
1:6 အခုတော့, ယုဒအမြိုးသား၏သူတွေထဲမှာ, ဒံယလေသကျရှိ, ဟာနနိသည်, မိရှေ, အာဇရိ.
1:7 ထိုအခါမိန်းမစိုး၏အကြီးအကဲသူတို့ကိုအမည်များကိုတာဝန်ပေး: ဒံယေလ, Belteshazzar; ဟာနနိအား, ရှာဒရက်; မိရှေမှ, Meshach; အာဇရိမှ, Abednego.
1:8 ဒါပေမဲ့ဒံယေလသူသည်ရှင်ဘုရင်၏န့်ညက်နှင့်ညစ်ညူးစေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသူ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြေရှင်းပြီး, မ, စပျစ်ရည်ကိုသောက်သူနှင့်အတူ, သူညစ်ညမ်းခြင်းကိုမပြုစေခြင်းငှါမိန်းမစိုး၏အကြီးအကဲမျ​​ား၏မေတ္တာရပ်ခံ.
1:10 ထိုအခါမိန်းမစိုး၏ခေါင်းဆောင်ဒံယေလကပြောပါတယ်, "ငါသည်ရှင်ဘုရင်အငါ့သခင်၏ကွောကျပါ၏, အဘယ်သူသည်သင်တို့အဘို့အအစားအစာနှင့်သောက်စရာအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်, အဘယ်သူသည်, သူသည်သင်၏မျက်နှာများကအခြားလူငယ်အချို့သင့်ရဲ့အသက်တွေထက် leaner ဖြစ်ကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်လျှင်, သငျသညျရှငျဘုရငျအားငါ့ဦးခေါင်းသည်အရှုံးခံမယ်။ "
1:11 နဲ့ Daniel Malasar ဖို့ကဆိုသည်, တော်မူသောမိန်းမစိုး၏ခေါင်းဆောင်ဒံယလေကကျော်ချိန်းချက်, ဟာနနိသည်, မိရှေ, အာဇရိ,
1:12 "ငါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသပ်ဖို့သင်သူတပါးကိုတောင်းသော်လည်း, ကိုယ်တော်၏ကျွန်, ဆယ်ရက်များအတွက်, နှင့်အမြစ်များကိုစားရန်နှင့်ရေမသောက်ရမှငါတို့အားပေးတော်မူကြကုန်အံ့,
1:13 ပြီးတော့ကျနော်တို့ရဲ့မျက်နှာများကိုစောင့်ရှောက်မည်, နှင့်ရှင်ဘုရင်ရဲ့အစာကိုစားသောသူသည်သားသမီးများ၏မျက်နှာများ, ပြီးနောက်သင်မြင်သောအရာကိုအရသိရသည်သင့်ရဲ့ကျွန်တို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ "
1:14 ထိုစကားကိုကြားရတဲ့အခါ, သူဆယ်ရက်အဘို့ထိုသူတို့စမ်းသပ်ပြီး.
1:15 ဒါပေမယ့်, တဆယ်ရက်အကြာမှာ, သူတို့မျက်နှာများကိုရှငျဘုရငျ၏အစာအာဟာရကိုစားခဲ့သောသူအပေါင်းတို့သည်အမြိုးသားအထက် သာ. ကောင်း၏နှင့် fatter သည်ထင်ရှား.
1:16 ထို့နောကျ, Malasar ကိုသူတို့ဝေမျှပယ်ရှင်းပြီနှင့်သောက်သုံးရေအဘို့မိမိတို့ကိုစပျစ်ရည်, သူကသူတို့ကိုအမြစ်များကိုပေး၏.
1:17 သို့သျောလညျး, ဤကလေးများမှ, ဘုရားသခင့ရှိသမျှစာအုပ်ထဲတွင်အသိပညာနှင့်ညွှန်ကြားချက်ကိုပေး၏, နှငျ့ဉာဏျပညာ, ဒါပေမဲ့ဒံယေလ, ထို့ပြင်အားလုံးရူပါရုံနားလည်မှုနှင့်အိပ်မက်များ.
1:18 ထိုအခါအချိန်ပြီးစီးခဲ့သောအခါ, ရှငျဘုရငျကိုသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခဲ့သောပြီးနောက်, မိန်းမစိုး၏အကြီးအကဲဗုခဒ်နေဇာ၏ရှေ့တော်ရှေ့တော်၌သူတို့အားကိုဆောင်ခဲ့.
1:19 နှင့်, ရှငျဘုရငျကိုသူတို့နှင့်အတူစကားပွောသောအခါ, အဲဒီမှာဒံယလေကအဖြစ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှဆိုဤမျှလောက်ကြီးစွာသောတွေ့ရှိဘူး, ဟာနနိသည်, မိရှေ, အာဇရိ; ဒါသူတို့ရှင်ဘုရင်၏မျက်မှောက်တော်၌ရပ်လျက်.
1:20 နှင့်ဥာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးရှိသမျှ concept ကိုအတွက်, ရှငျဘုရငျကိုသူတို့နှင့်အတူတိုင်ပင်အကြောင်း, သူကသူတို့ကိုအတူတကွထည့်သွင်းရှိသမျှကိုဗျာဒိတ်ခံခြင်းနှင့်နက္ခတ်ဗေဒင်သည်ထက်ဆယ်ဆပိုကောင်းဖြစ်တွေ့ရှိ, သူ့အစျခုလုံးကိုနိုငျငံတျော၌ရှိသတည်း.
1:21 ဒါဒံယလေကကနျြရစျ, ပင်မင်းကြီးသည်ကုရု၏ပထမဦးဆုံးနှစ်တိုင်အောင်.
2:1 ဗုခဒ်နေဇာ၏နန်းစံ၏ဒုတိယနှစျတှငျ, ဗုခဒ်နေဇာသည်အိပ်မက်ကိုမြင်လျှင်, နှင့်သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်အလွန်ကြောက်, နှင့်သူ၏အိပ်မက်သူ့ထံမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်.
2:2 သို့သော်လည်းမင်းကြီးသည်ဗျာဒိတ်ခံသည်အတိုင်း, နှင့်နက္ခတ်ဗေဒင်, နှင့်မျှောဆရာ, ခါလဒဲရှင်ဘုရင်အားသူ၏အိပ်မက်ထုတ်ဖေါ်ဖို့စုဝေးရပါ. ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ရောက်ရှိ, သူတို့သည်ရှင်ဘုရင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်နေကြ၏.
2:3 ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်သူတို့ကဆိုပါတယ်, "ကျွန်မနေတဲ့အိပ်မက်ကိုမြင်လျှင်, နှင့်, စိတျထဲမှာရောထွေးလျက်ရှိ, ငါငါမြင်သောအရာကိုမသိကြပါ။ "
2:4 ထိုအခါလဒဲ Syriac တွင်ရှင်ဘုရင်ကိုပြန်လျှောက်, "အိုမင်းကြီး, အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်. ကိုယ်တော်၏ကျွန်ဖို့အိပ်မက်ကိုပြောပြပါ, ကျနော်တို့က၎င်း၏အနက်ကိုဘော်ပြတော်ပါလိမ့်မယ်။ "
2:5 ထိုအဖြေကိုအတွက်, ရှင်ဘုရင်သည်ခါလဒဲလူကလည်း,, "က၏မှတ်ဉာဏ်ငါ့ထံမှဝေးချော်ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအကြှနျုပျကိုဖို့အိပ်မက်ထုတ်ဖေါ်မဟုတ်လျှင်, နှင့်၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကို, သငျသညျအသေသတ်ခြင်းကိုခံရလိမျ့မညျ, နှင့်သင့်အိမ်များသိမ်းယူလိမ့်မည်.
2:6 ဒါပေမယ့်သင်ကအိပ်မက်နှင့်၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါလျှင်, သငျသညျငါ့ထံမှဆုလာဘ်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်, နှင့်လက်ဆောင်များ, တို့နှင့်ကြီးသောဂုဏ်အသရေ. ထို့ကြောင့်, ငါ့ထံသို့အိပ်မက်နှင့်၎င်း၏အနက်ကိုထုတ်ဖေါ်။ "
2:7 သူတို့သည်နောက်တဖန်ကလညျး, "ရှင်ဘုရင်သည်သူ၏ကျွန်များဖို့အိပ်မက်ပြောပြပါရစေ, ကျနော်တို့က၎င်း၏အနက်ကိုဘော်ပြတော်ပါလိမ့်မယ်။ "
2:8 ရှငျဘုရငျကလညျး, သင်က၏မှတ်ဉာဏ်ငါ့ကိုပယ်ချော်တော်မူကြောင်းကိုသိသောကြောင့် "ငါသည်သင်အချိန်များအတွက်တုံ့ဆိုင်းနေကြသည်ကိုသိရပါ၏.
2:9 ထို့ကြောင့်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုဖို့အိပ်မက်ထုတ်ဖေါ်ကြဘူးလျှင်, သငျသညျအကွောငျးကိုရောက်ပါတစ်ဦးတည်းသာနိဂုံးချုပ်လည်းမရှိ, အနက်ထိုနည်းတူမှားယွင်းသောကြောင်း, နှင့်ပရိယာယ်နှင့်ပြည့်ဝ၏ထုပ်ပိုး, အချိန်ကိုပယ်ရှားဖြတ်သန်းသည်အထိသည်ငါ့ရှေ့မှာစကားပြောဖို့မှသကဲ့သို့. ဆိုတော့, ငါ့ကိုအိပ်မက်ကိုပြောပြ, ငါသညျလညျးသငျသညျအကြှနျုပျကိုပြောပြသောအနက်ထိုနည်းတူမှန်သိရကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်။ "
2:10 ထိုအခါခါလဒဲရှင်ဘုရင်ရှေ့တော်၌ဖြေကြား, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, "သင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြီးမြောက်နိုင်သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမရှိတယ်, အိုမင်းကြီး. ရှင်ဘုရင်တယောက်မျှမရှိတယ်မများအတွက်, သို့သော်ကြီးသော, တိုင်းပရောဖက်ကနေဒီမျိုးအဖြေတောင်း, နှင့်ဗေဒင်ဆရာ, နှင့်ခါလဒဲ.
2:11 သငျသညျရှာသောအဖြေများအတွက်, အိုမင်းကြီး, အလွန်ခက်ခဲသည်. ရှငျဘုရငျ၏ရှေ့တျော၌ကထုတ်ဖေါ်နိုင်သူမည်သူမဆိုတွေ့နိုင်ပါသည်လညျးမ, နတ်ဘုရား မှလွဲ., အဘယ်သူ၏စကားပြောဆိုမှုယောက်ျားနှင့်အတူမဖြစ်၏။ "
2:12 သူကထိုစကားကိုကြားလျှင်, ရှင်ဘုရင်မှာထား, ဒေါသအမျက်နှင့်ဒေါသအမျက်ကြီးသောအတွက်, ဗာဗုလုန်ပညာရှိအပေါင်းတို့ကိုဖကျြဆီးခံရသင့်ကြောင်း.
2:13 ထိုအမိနျ့တျောဆငျ့ထွက်သွားပြီပြီးမှ, ပညာရှိတို့အသေသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်; နှင့်ဒံယေလနှင့်သူ၏အပေါင်းအဘော်ဆည်းကပ်ခဲ့ကြ, ဖကျြဆီးခံရရန်.
2:14 ထိုအခါဒံယလေကမေးလြှောကျလြှငျ,, ပညတ္တိကျမ်းနှင့်ဝါကျအကြောင်းကို, အာရုတ်၏, ရှင်ဘုရင်၏တပ်ကို၏အထွေထွေ, ဗာဗုလုန်ပညာရှိတို့ကို execute မှထွက်သွားပြီခဲ့သူ.
2:15 ထိုမင်းသည်သူ့ကိုမေးခဲ့တယ်, အဘယ်သူသည်ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်, အဘယ်အရာကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောကြမ်းကြုတ်သောဝါကျရှင်ဘုရင်၏မျက်နှာကနေထွက်သွားပြီခဲ့သည်. ဆိုတော့, အာရုတ်ဒံယေလဒီကိစ္စကိုထုတ်ဖော်ပြသပြီးမှ,
2:16 ဒံယေလသည် သွား. သူသည်ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ဖေါ်ဖို့အချိန်ပေးရန်မယ်လို့ရှင်ဘုရင်၏ဟုမေး.
2:17 မိမိအိမျသို့သှားပွီးဟာနနိဖို့တာဝန်ကရှင်းပြခဲ့သည်, နှင့်မိရှလေ, အာဇရိ, သူ၏အပေါင်းအဘော်,
2:18 သူတို့ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏၏မျက်နှာကိုမတိုင်မီမသနားတျောမူရှာအံ့သောငှါမယ်လို့ဒါ, ဒီနက်နဲသောအရာနှင့် ပတ်သက်., ဒါဒံယေလနှင့်သူ၏အပေါင်းအဘော်ဗာဗုလုန်မြို့၏အခြားပညာရှိတို့နှင့်အတူမပျက်စီးဘဲနေနိုင်မည်အကြောင်း.
2:19 ထိုအခါလျှို့ဝှက်ချက်ညဉ့်အခါဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုတို့ကဒံယေလကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်. ဒံယလေကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ,
2:20 နှင့်ကျယ်လောင်စွာစကားပြော, ဟုသူကပြောသည်, "သခင်၏နာမတော်ကိုကာလအစဉ်အမြဲပစ္စုပ္ပန်မျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်း, အဘို့အမင်္ဂလာဖြစ်နိုင်ပါစေ; ပညာနှင့်အသည်းအဘို့မိမိအများမှာ.
2:21 သူသည်ထိုအကြိမ်နှင့်အသက်အရွယ်ပွောငျးလဲ. သူနိုင်ငံတို့ဝေးကြာနှင့်သူကသူတို့ကိုတည်စေ. သူနားလည်သောသူတို့အားပညာရှိဖြစ်ကြ၏သောသူတို့အားနှင့်သင်ကြားရေးကျွမ်းကျင်မှုပညာကိုပေးသည်.
2:22 သူကနက်နဲဝှက်ထားသောအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသ, သူသည်မှောင်မိုက်၌တည်ထားပြီးအဘယ်အရာကိုသိတယ်. ထိုအလငျးကိုယျတျောနှငျ့အတူဖြစ်ပါသည်.
2:23 သင့်ဆီ, ငါတို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခငျသညျ, ငါဝန်ခံ, ပြီးတော့သင်, ငါချီးမွမ်းရ. သငျသညျကြှနျုပျအားပညာနှင့်အသည်းပေးထားပြီ, ယခုသငျသညျအကြှနျုပျတို့သညျ၏ဟုမေးသောအရာကိုငါ့အားထင်ရှားပါပြီ, သငျသညျကြှနျုပျတို့အတှကျရှငျဘုရငျ၏အတှေးအအဝတ်မခြုံဘဲပြီ။ "
2:24 ထိုနောက်မှ, ဒံယလေကအာရုတ်ထံသို့ ဝင်., ရှငျဘုရငျကိုဗာဗုလုန်ပညာရှိတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ချိန်းချက်တော်မူသော, သူကဒီလမ်းအတွက်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်, "ဗာဗုလုန်ပညာရှိတို့ကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့. ရှင်ဘုရင်ရှေ့တော်၌ငါ၌ယူ ခဲ့., ငါရှင်ဘုရင်အားဖြေရှင်းချက်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ "
2:25 ထိုအခါအာရုတ်လျင်မြန်စွာရှင်ဘုရင်သည်ဒံယေလကိုဆောင်ခဲ့, သူကသူ့ကိုအားဆို၏, "ငါသည်ယုဒအမျိုး transmigration ၏သားယောက်ျားသည်တွေ့ကြပြီ, သူသည်ရှင်ဘုရင်ထံဖြေရှင်းချက်ကိုကြေညာလိမ့်မယ်။ "
2:26 ရှငျဘုရငျဖွဆေိုနှင့်ဒံယေလကပြောပါတယ်, အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီ Belteshazzar ခဲ့သည်, "သင်ကယ့်ကိုသငျသညျအကြှနျုပျကိုရန်ငါမြင်ဘူးသောအိပ်မက်နှင့်၎င်း၏အနက်ကိုထုတ်ဖေါ်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပါနဲ့?"
2:27 ဒံယလေ, ရှငျဘုရငျကိုရင်ဆိုင်နေရ, ကလညျး, ရှငျဘုရငျကိုရှာကြံသော "လျှို့ဝှက်ချက်, ပညာရှိတို့, ဗျာဒိတ်ခံ, နှင့်ဗေဒင်ဟောသောသူရှင်ဘုရင်အားထုတ်ဖေါ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း.
2:28 သို့သော်နက်နဲသောအရာမှထုတ်ဖော်ပြသသူကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်လည်းမရှိ, သငျသညျမှထင်ရှားခဲ့သူ, ရှငျဘုရငျသဗုခဒ်နေဇာ, အဘယ်အရာကိုအဆုံးစွန်သောကာလ၌ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့အိပ်မက်နှင့်သင့်အိပ်ရာပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၏ရူပါရုံ, ဤကဲ့သို့သောများမှာ.
2:29 သငျသညျ, အိုမင်းကြီး, စဉ်းစားရန်စတင်, သင့်ရဲ့စောင်ရှိနေစဉ်, နောကျမှဖြစ်လတံ့သောအရာကိုအကြောင်းကို. ထိုအလျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသတော်မူသောသူဖြစ်လတံ့သောအရာကိုသင်ပြသ.
2:30 ငါ့ထံသို့, ထိုနည်းတူ, ဒီနက်နဲသောအရာကိုဘော်ပြနေသည်, ငါ့ကိုပိုပြီးအခြားသက်ရှိအရာထက်သောပညာသည်နှင့်အညီမပေး, ဒါပေမယ့်အနက်ကိုရှငျဘုရငျအားထင်ရှားစေခြင်းငှါဒါကြောင့်, သင့်စိတ်အကြံအစည်သိစေခြင်းငှါဒါ.
2:31 သငျသညျ, အိုမင်းကြီး, လွှ, အကယ်စင်စစ်, အလွန်ကြီးစွာသောရုပ်တုတူတစ်ခုခု. ဤသည်ရုပ်တု, ကွီးမွငျ့ခဲ့သည့်, သငျသညျအထကျခြီးမွှောကျရပျလကျြ, သင်ဘယ်လောက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောစဉ်းစား.
2:32 ဒီရုပ်တု၏ဦးခေါင်းကိုအကောင်းဆုံးသောရွှေခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ရင်သားကင်ဆာနှင့်လက်နက်, ငွေဖြင့်ပြီးကြ၏, နောက်ထပ်ပေါ်, ဝမ်းနှင့်ပေါင်ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏;
2:33 ဒါပေမယ့် Shin သံဖြင့်ပြီးကြ၏, ခြေတစ်အချို့အစိတ်အပိုင်းကိုသံဖြင့်ပြီးကြ၏နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရွှံ့ဖြင့်ပြီးကြ၏.
2:34 ကိုကျောက်တောင်ပေါ်ကနေလက်၌မပါဘဲချွတ်ကျိုးပဲ့သည်အထိဒါသငျသညျကွညျ့ရှု, နှင့်၎င်း၏ခြေထောက်ပေါ်ရုပ်ထုလှုပ်ခတ်, အရာသံနှင့်ရွှံ့ဖြင့်ပြီးကြ၏, ထိုသို့သူတို့ကိုချိုးဖဲ့.
2:35 ထိုအခါသံ, ရွှံ့, ကြေးဝါ, ငွေ, နှင့်ကိုရွှေအတူတကွနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရကာနွေရာသီဝင်း၏ပြာကဲ့သို့လျော့ခဲ့ကြ, သူတို့လျင်မြန်စွာလေကွာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်, မရှိရာအရပ်ကိုထိုသူတို့အဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်; ဒါပေမယ့်ရုပ်ထုကိုရိုက်သောကျောက်ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောသောတောင်ပေါ်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်မြေတပြင်လုံးကိုဖြည့.
2:36 ဒါဟာအိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်; ငါတို့သည်လည်းသင်တို့ရှေ့မှာ, ယင်း၏အနက်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်, အိုမင်းကြီး.
2:37 သငျသညျရှငျဘုရငျတို့အကြားတစ်ဦးသည်ရှင်ဘုရင်တွေဟာ, နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏သင်တို့အဖို့နိုငျငံတျောသညျပေးတျောမူပွီ, နှင့်အသည်း, နှင့်အာဏာ, နှင့်ဘုန်းအသရေ,
2:38 ယောက်ျားနှင့်လယ်ပြင်၌ကျိန်းဝပ်၏တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့သည်အရပ်တို့ကိုကျသောအမြိုးသားတို့. သူထိုနည်းတူသင်တို့လက်သို့လေကြောင်း၏ပျံသန်းသတ္တဝါများအားပေးတော်မူပြီ, သူသည်သင်၏ဘုံအောက်၌ရှိသမျှသောအရာတို့ကိုနေရာချထားပါတယ်. ထို့ကြောင့်, သငျသညျရွှေဦးခေါင်းများမှာ.
2:39 နှင့်အပြီးသင်, အခြားနိုငျငံတျောသညျထမညျ, သငျသညျယုတ်ညံ့, ငွေအ, နှင့်ကြေးဝါသည်အခြားတတိယနိုငျငံတျောသညျ, လောကဓာတ်လုံးကိုအုပ်စိုးရသော.
2:40 စတုတ္ထနိုငျငံတျောသညျသံကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်. ရုံခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသံချိုးနှင့်အောင်နိုင်အဖြစ်, ဒါကြောင့်ဤအရာအလုံးစုံချိုးနဲ့နှိပ်စက်တော်မူမည်.
2:41 ထို့အပွငျ, သငျသညျခြေနှင့်ခြေချောင်းအိုးထိန်းသမားရဲ့ရွှံ့စေးနှင့်သံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မွငျသောကွောငျ့, နိုင်ငံတော်ကိုဝေဖန်ကြလိမ့်မည်, သို့သော်, သံများ၏စလစ်ကနေသူ့ရဲ့မူရင်းကိုယူပါလိမ့်မယ်, သငျသညျသံရွှံ့ကနေမြေထည်နှင့်ရောသောမွငျလြှငျကတည်းက.
2:42 ထိုအခါခွခြောငျးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသံနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရွှံ့ဖြင့်ပြီးကြ၏အဖြစ်, နိုငျငံတျော၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မည်.
2:43 သို့သျောလညျး, သင်သံကိုမြေကြီးထဲကနေအိုးနှင့်ရောသောမွငျသောကွောငျ့, သူတို့အမှန်ပင်ယောက်ျား၏အမျိုးအနွယ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့သူတို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်လိုက်နာမည်မဟုတ်, သံအိုးခြမ်းနှင့်ရောမရနိုငျသကဲ့သို့.
2:44 သို့သော်သူတို့အားနိုင်ငံတို့၏လက်ထက်၌, ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏ဖကျြဆီးခံရဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်တဲ့နိုငျငံတျောသညျလာအောင်နှိုးဆွပါလိမ့်မယ်, နှင့်သူ၏နိုင်ငံကိုအခြားလူများလက်သို့အပ်မည်မဟုတ်ပါ, ထိုသို့နှိပ်စက်တော်မူမည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွသောဤနိုင်ငံတို့ဆုံးရှုံးပါလိမျ့မညျ, နှင့်ဤနိုငျငံတျောသညျသူ့ဟာသူထာရပ်ပါလိမ့်မယ်.
2:45 သငျသညျကိုမွငျလြှငျအဘယျသို့နှင့်အညီ, ပိတ်သောကျောက်တို့သည်လက်မပါဘဲတောငျပျေါမှဝေးကိုက်ခဲ့လို့, ထိုသို့မြေထည်ကိုဖိ, နှင့်သံ, နှင့်ကြေးဝါကို, နှင့်ငွေ, နှင့်ကိုရွှေ, ကြီးမြတ်သောဘုရားသည်ဤပြီးနောက်ဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုရှငျဘုရငျကိုပြတော်မူပြီ. ထိုအခါအိပ်မက်မှန်, နှင့်၎င်း၏အနက်ကိုသစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသည်။ "
2:46 ထိုအခါမင်းကြီးသည်ဗုခဒ်နေဇာသည်သူ၏မျက်နှာပေါ်မှာလှဲနဲ့ Daniel adored, သူကိုသူတို့ကသူ့ကိုသားကောင်များနှင့်နံ့သာပေါင်းကိုမှယဇျပူဇျောအတွက်ပူဇော်သင့်ကြောင်းအမိန့်တော်အတိုင်း.
2:47 ဒီတော့ရှင်ဘုရင်သည်ဒံယေလနှင့် Said နှင့်အတူစကားပြော, "အမှန်ဆိုသည်ကား,, သင်တို့၏ဘုရားသခင်တပါးသောဘုရားတို့၏ဘုရားသခငျဖြစ်ပါသည်, နှင့်သခင်ရှင်ဘုရင်၏အ, လည်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစ်ထုတ်ဖေါ်, သင်ဤနက်နဲသောအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ကတည်းက။ "
2:48 ထိုအခါရှင်ဘုရင်မြင့်မားသောရာထူးဒံယေလထမြောက်တော်မူခြင်းနှင့်သူ့ကိုအများကြီးကြီးမြတ်လက်ဆောင်တွေပေးခဲ့တယ်, သူသည်ဗာဗုလုန်၏နိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်ကျော်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နှင့်ဗာဗုလုန်မြို့သားအပေါင်းတို့သည်အခြားပညာရှိတို့သည်ကျော်ကဲမငျး၏အကြီးအကဲအဖြစ်သူ့ကိုခန့်အပ်ထားသော.
2:49 သို့သော်, ဒံယလေကသူရှာဒရက်ကိုခနျ့အပျသောရှင်ဘုရင်၏လိုအပ်, Meshach, နှင့် Abednego ဗာဗုလုန်ခရိုင်၏အကျင့်ကျော်. သို့သော်ဒံယလေသညျကိုယျတျောရှငျဘုရငျ၏တံခါးနားမှာခဲ့သည်.
3:1 ရှငျဘုရငျဗုခဒ်နေဇာရွှေရုပ်တု လုပ်., မြင့်ခြောက်တောင်ကျယ်ပြန့်ခြောက်ဆယ်အတောင်, သူသည်ဗာဗုလုန်ခရိုင်အတွင်းအီရတ်၏လွင်ပြင်၌ဖွင့်လှစ်.
3:2 ထိုအခါမင်းကြီးသည်ဗုခဒ်နေဇာဝန်အတူစုဝေးစေခြင်းငှါစေလွှတ်, ကဲများနှင့်တရားသူကြီးများ, ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်တပ်မှူးများ, အဆိုပါဒေသများနှင့်ရှိသမျှသောခေါင်းဆောင်များ, အဆိုပါရုပ်တု၏အပျနှံမှုအတွက်အတူတကွလာမှ, အရာမင်းကြီးသည်ဗုခဒ်နေဇာကြီးပြင်းခဲ့.
3:3 ထိုအခါဝန်, ကဲများနှင့်တရားသူကြီးများ, ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်မှူးမတ်, အာဏာခန့်အပ်ထားသောသူ, အဆိုပါရုပ်တု၏အပျနှံဘို့ကျင်းပရမည်မှသကဲ့သို့နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအပေါငျးတို့သခေါင်းဆောင်များအတူတကွယူဆောင်ခဲ့သည်, အရာမင်းကြီးသည်ဗုခဒ်နေဇာကြီးပြင်းခဲ့. ဒါကြောင့်သူတို့ရှင်ဘုရင်အဗုခဒ်နေဇာထူထောင်ခဲ့သောရုပ်ထုရှေ့မှာရပ်.
3:4 ထိုအရာ၌ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကိုကြွေးကြော်, "သင်ဖို့အတွက်ကဆိုပါတယ်, သငျသညျလူမျိုး, အမျိုးအနွယ်, နှင့်ဘာသာစကားများ,
3:5 သင်တံပိုးမှုတ်သံနှင့်ပိုက်များနှင့်တယောနားထောင်မည်သည့်အခါနာရီအတွက်, စောင်းတီးနှင့်တယော, နှင့်ဆင်ဖိုနီများနှင့်ဂီတ၏အမြိုးမြိုးသော, သငျသညျပြပ်နှင့်ရွှေရုပ်တုကိုးကွယ်ရမယ်, အရာမင်းကြီးသည်ဗုခဒ်နေဇာထူထောင်ထားပါတယ်.
3:6 သို့သော်မည်သူမဆိုပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်မည်မဟုတ်ပါလျှင်, တူညီသောနာရီအတွက်သူလောင်သောမီးတစ်မီးဖိုထဲသို့ချပစ်လိမ့်မည်။ "
3:7 ထိုနောက်မှ, ထိုကွောငျ့, အဖြစ်မကြာမီလူများအပေါင်းတို့သည်တံပိုးမှုတ်သံကိုကြားအဖြစ်, ပိုက်နှင့်တယော, စောင်းတီးနှင့်တယော, နှင့်ဆင်ဖိုနီများနှင့်ဂီတ၏အမြိုးမြိုးသော, လူများအပေါင်းတို့သည်, အမျိုးအနွယ်, နှင့်ဘာသာစကားများပြပ်ဝပ်နှင့်ရွှေရုပ်တု adored, အရာမင်းကြီးသည်ဗုခဒ်နေဇာထူထောင်ခဲ့သည်.
3:8 နောက် ... ပြီးတော့, တစ်ချိန်တည်းအကြောင်းကို, အချို့သြဇာခါလဒဲယုဒလူတို့သညျ လာ. စွပ်စွဲ,
3:9 သူတို့ရှင်ဘုရင်အဗုခဒ်နေဇာအားဆို၏, "အိုမင်းကြီး, အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်.
3:10 သငျသညျ, အိုမင်းကြီး, အမိနျ့တျောကိုထူထောင်ခဲ့ကြ, တံပိုးမှုတ်သံကိုကြားစေခြင်းငှါ, အဘယ်သူသည်အသီးအသီးသောကြောင့်, ပိုက်နှင့်တယော, စောင်းတီးနှင့်တယော, နှင့်ဆင်ဖိုနီများနှင့်ဂီတ၏အမြိုးမြိုးသော, မိမိကိုယျကိုနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ရွှေရုပ်တုကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်.
3:11 သို့သော်လည်းတစုံတယောက်သောသူပြပ်နှင့်ကိုးကွယ်မည်မဟုတ်ပါလျှင်, သူလောင်သောမီးတစ်မီးဖိုထဲသို့ချခြင်းကိုမယ်လို့.
3:12 သို့သျောလညျးသြဇာယုဒလူတို့ရှိပါတယ်, သင်သည်ဗာဗုလုန်ဒေသ၏အကျင့်ကျော်ခန့်အပ်တာဝန်ရှိသည်ဟုဘယ်သူကို, ရှာဒရက်, Meshach, နှင့် Abednego. ဤသူတို့သညျ, အိုမင်းကြီး, သင့်ရဲ့အမိန့်ကိုငြင်းခဲ့ကြ. သူတို့ကသင့်ရဲ့တပါးသောဘုရားတို့ကိုမကိုးကွယ်ကြဘူး, သူတို့သည်သင့်ပေါ်ထွန်းစေတော်မူသောရွှေရုပ်တုကိုးကွယ်ကြဘူး။ "
3:13 ထိုအခါဗုခဒ်နေဇာ, ဒေါသအမျက်နှင့်အမျက် ထွက်., ကြောင်းရှာဒမှာထားတော်မူ, Meshach, နှင့် Abednego ယူဆောင်ရပါမည်, ဆိုတော့, နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, သူတို့ရှင်ဘုရင်ရှေ့တော်၌ယူဆောင်ခဲ့သည်.
3:14 မင်းကြီးသည်ဗုခဒ်နေဇာသူတို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဟု, "ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ Is, ရှာဒရက်, Meshach, နှင့် Abednego, သငျသညျငါ၏ဘုရားတို့ကိုအကိုးကှယျမ, မဟုတ်သလိုရွှေရုပ်တုကိုးကွယ်, ငါထခန့်ထားပြီဖြစ်သော?
3:15 ထို့ကြောင့်, ယခုသင်ကိုပြင်ဆင်လျှင်, သင်တံပိုးမှုတ်သံကိုနားထောငျအခါတိုင်း, ပြွန်, တယော, စောင်းနှင့်တယော, နှင့်ဆင်ဖိုနီများနှင့်ဂီတ၏အမြိုးမြိုးသော, ကိုယ်ကိုကိုယ်နှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ငါဖန်ဆင်းသောရုပ်တုကိုးကွယ်. သင်တို့မူကားကိုးကွယ်မသွားလျှင်, တူညီသောနာရီ၌သင်တို့ကိုလောင်သောမီး၏မီးဖိုထဲသို့ချပစ်လိမ့်မည်. ထိုအသင်တို့ကိုငါ့လက်မှကယ်လွှတ်မည်သောဘုရားသခငျသညျအဘယ်သူသည်?"
3:16 ရှာဒရက်, Meshach, နှင့် Abednego ဖြေကြားမင်းကြီးဗုခဒ်နေဇာအားဆို၏, ကျွန်တော်တို့ကိုဤအမှု၌သင်တို့စကားကိုနားထောငျဖို့အတှကျ "ဒါဟာညာဘက်မဟုတ်ပါဘူး.
3:17 အဘို့အကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျကိုကြည့်ရှု, အဘယ်သူကိုကြှနျုပျတို့ကိုးကှယျ, လောင်သောမီး၏မီးဖိုကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ရန်နှင့်သင့်လက်မှကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်နိုင်, အိုမင်းကြီး.
3:18 ဒါပေမယ့်ပင်သူမပါလျှင်, သင်သိပါစေ, အိုမင်းကြီး, ငါတို့သည်သင်တို့၏ဘုရားကိုမကိုးကွယ်ကိုးကွယ်ကြ၏မည်မဟုတ်ကြောင်း, မဟုတ်သလိုရွှေရုပ်တုကိုးကွယ်, ရာသငျသညျထမွောကျပြီ။ "
3:19 ထိုအခါဗုခဒ်နေဇာဒေါသအမျက်နှင့်ပြည့်စုံလေ၏နှင့်သူ၏မျက်နှာ၏အသွင်အပြင်ရှာဒရက်ဆန့်ကျင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်, Meshach, နှင့် Abednego, သူသည်မီးဖိုထဲခုနစ်ကြိမ်သူ့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းမီးအပူခံရသင့်ကြောင်းအမိန့်တော်အတိုင်း.
3:20 ထိုမင်းသည်ရှာဒရက်၏ခြေရင်းခညျြနှောငျမှမိမိတပ်များ၏အပြင်းထန်ဆုံးယောက်ျားအမိန့်ထုတ်, Meshach, နှင့် Abednego, နှင့်လောင်သောမီး၏မီးဖိုထဲသို့ချလိုက်ဖို့.
3:21 ထိုခဏထိုလူတို့ဘောင်းခဲ့ကြသည်, နှင့်တစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့အင်္ကျီနှင့်အတူ, နှင့်သူတို့၏ဦးထုပ်, နှင့်၎င်းတို့၏ဖိနပ်, နှင့်မိမိတို့အဝတ်ကို, လောင်သောမီး၏မီးဖိုအလယ်ထဲသို့ချပစ်လေ၏.
3:22 ဒါပေမယ့်ဘုရင့်အမိန့်မီးဖိုထဲအလွန်အကျွံအပူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးပေါ်ခဲ့သည်. ရလဒ်အနေဖြင့်, ရှာဒရက်ချခဲ့သောသောသူတို့အားယောက်ျား, Meshach, နှင့် Abednego, မီးလျှံအားဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည်.
3:23 သို့သော်ဤသုံးယောက်, ကြောင်း, ရှာဒရက်, Meshach, နှင့် Abednego, ဘောင်းခဲ့ဘဲလျက်, လောင်သောမီး၏မီးဖိုအလယ်၌ပြပ်ဝပ်.
3:24 ထိုသူတို့ကမီးလျှံ၏အလယ်၌လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြ, ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းနှင့်သခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ.
3:25 ထိုအခါအာဇရိ, မတ်တပ်ရပ်နေစဉ်, ဒီထုံးစံ၌ဆုတောင်းပဌနာ, မီးအလယ်၌မိမိနှုတ်ကိုဖွင့်လှစ်, ဟုသူကပြောသည်:
3:26 "မင်္ဂလာရှိသင်, အိုထာဝရဘုရား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်, သင်၏နာမကိုအားလုံးအသက်အရွယ်အဘို့အခြီးမှမျးနှင့်ဘုန်းကြီးသောဖြစ်ပါသည်.
3:27 သင်ရုံသင်သည်ငါတို့အဘို့အလိုပြည့်စုံကြသမျှသောအမှုအရာအတွက်ဖြစ်ကြ၏, လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏အကျင့်ကိုဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏, နှင့်သင့်နည်းလမ်းတွေမှန်, လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏.
3:28 သင်အကြှနျုပျတို့အပျေါနှင့်ယေရုရှလင်ရောက်စေသမျှသောအမှုအရာအတွက်အညီအမျှစစ်မှန်တဲ့တရားစီရင်ပိုင်ရာ၌ခန့်ထားပြီ, ငါတို့ဘိုးဘေးများ၏သန့်ရှင်းသောမြို့တော်. အမှန်တရားနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအဘို့, သငျသညျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့အပြစ်များ၏ဤအရာအလုံးစုံနှိမ့်ချကြ.
3:29 ကျွန်တော်ပြစ်မှားမိပါပွီ, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှဆုတ်ခွာအတွက်ဒုစရိုကျကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြ, ကျနော်တို့အရာရာ၌စေတနာစိတ်ပျက်ပါပြီ.
3:30 ထိုအငါတို့သည်သင်တို့၏ဥပဒသေမြားမှနားမထောင်ခဲ့ကြ, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအမိန့်အတိုင်းမဟုတ်သလိုကျနော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိသို့မဟုတ်ပွုပါပွီ, ဒါကြောင့်ငါတို့နှင့်အတူကောင်းစွာသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်.
3:31 ထို့ကြောင့်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့အပျေါကိုဆောင်ခဲ့သောအရာအားလုံးကို, သငျတို့သညျကြှနျုပျတို့အတှကျပွုပါပွီသောသူအပေါင်းတို့သည်, သငျသညျစစ်မှန်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းပြုမိပါပြီ.
3:32 သငျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ရန်သူလက်သို့ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ကြပါပြီ: သစ္စာဖောက်, မတရားတဲ့နှင့်အများဆုံးမတရားသောသူ, ပြီးရှင်ဘုရင်ထံသို့, မတရားတဲ့နှင့်အများဆုံးမတရားသောသူ, ပို. ပင်ဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှအခြားသူများထက်.
3:33 ယခုမှာအကြှနျုပျတို့ပါးစပ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့မဟုတ်. ကျွန်တော်တစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်သင့်ကျွန်နှင့်သင်ကိုးကှယျသောသူတို့အားတစ်ဦးအရှက်ကွဲဖြစ်လာကြပါပြီ.
3:34 အစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်မနေပါနဲ့, အကြှနျုပျတို့သညျကိုမေး, ဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့နာမ, နှင့်သင့်သောပဋိညာဉ်တရားများကိုဖျက်ပယ်ကြဘူး.
3:35 ထိုအခါငါတို့တှငျမှသင်၏သနားတျောမူပါရုပ်သိမ်းပေးရန်ပါဘူး, ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဗြဟံ၏, သင့်ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်, နှင့်ဣဇာက်, ကိုယ်တော်၏ကျွန်, အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး, သန့်ရှင်းသောတဦးတည်း.
3:36 သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူပြောပြီ, သငျသညျကောင်းကင်ကြယ်ကဲ့သို့အများနှင့်သမုဒ္ဒရာပေါ်တွင်သဲများကဲ့သို့သူတို့၏အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားမယ်လို့ကတိပေး.
3:37 ငါတို့သည်, အိုထာဝရဘုရား, ရှိသမျှသည်အခြားသောလူမျိုးထက်ပိုလျော့နေကြတယ်, ကျနော်တို့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့တစ်လျှောက်လုံးအနိမ့်ယူဆောင်နေကြ, ဒီနေ့, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့အပြစ်များ၏.
3:38 မရှိ, ဒီအချိန်မှာ, ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, သို့မဟုတ်မင်း, သို့မဟုတ်တစ်ညျပရောဖကျ, မျှမမီးရှို့, သို့မဟုတ်ယဇျပူဇျော, သို့မဟုတ်ပူဇော်သက္ကာ, သို့မဟုတ်နံ့သာပေါင်းကို, ပထမဦးဆုံးအသီးသို့မဟုတ်နေရာ, မင်းမျက်လုံးထဲမှာ,
3:39 ငါတို့သည်သင်တို့၏မသနားတျောမူရှာတွေ့နိုင်မည်အကြောင်းနိုင်အောင်. သို့သော်ငြားလည်း, တစ်ဦးနှလုံးကြေကွဲခြင်းဝိညာဉ်နှင့်တကွနှိမ့်ချစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံခဲ့သည်ပါစေ.
3:40 ကိုယ့်ထီးနှင့်နွားများ၏မီးရှို့၌ရှိသကဲ့သို့, နှင့်အဆီသိုးသငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဇျပူဇျောသင်တို့မျက်မှောက်၌ဤနေ့ဖြစ်ပါစေ, သငျသညျကိုနှစ်သက်နိုင်ရန်အတွက်. သငျသညျ၌ခိုလှုံသောသူတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမအရှက်ကွဲစရာဖြစ်ဘို့.
3:41 ယခုမှာကျွန်တော်လုံးလုံးကိုသင်အတိုင်းလိုက်နာ, နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျကိုကွောကျရှံ့, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏မျက်နှာကိုမရှာ.
3:42 အရှက်ကွဲစေခြင်းငှါငါတို့ကိုထားမနေပါနဲ့, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ clemency နှင့်အတူသဘောတူညီချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်သင့်သနားခြင်းကရုဏာ၏အလူအစုအဝေးအညီ.
3:43 နှင့်သင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းနှင့်သင်တို့၏နာမကိုချီးမွမ်းလိုသောငှါ, အိုထာဝရဘုရား.
3:44 ထိုလူအပေါင်းတို့သူတို့အားဘေးဥပဒ်ကိုဦးတည်ကိုယ်တော်၏ကျွန်ဦးဆောင်လမ်းပြသူကိုရှက်ကြောက်ခြင်းကိုခံကြစေ. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့်ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါနှင့်သူတို့၏အစွမ်းသတ္တိကိုနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်.
3:45 ထိုသူတို့ကသင်တို့သည်သခင်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိစေခြင်းငှါ, တစ်ခုတည်းသောဘုရားသခငျသညျ, နှင့်ကမ္ဘာအထက်ဘုန်းကြီးသော။ "
3:46 ထိုသူတို့ကငြိမ်းမရ, ၌သူတို့ကိုလှဲချခဲ့သောရှင်ဘုရင်၏သူတို့အားအမှုထမ်း, ရေနံနှင့်အတူမီးဖိုထဲအပူမှ, နှင့်ပိုက်ဆန်, နှင့်အစေး, နှင့်ဖြီး.
3:49 သို့သော်သခင်ဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်မီးဖိုထဲသို့အာဇရိနှင့်သူ၏အပေါင်းအဘော်နှင့်အတူဆင်းသက်; သူသည်မီးဖိုထဲထဲကမီးလျှံကိုနှင်ထုတ်.
3:50 ထိုမင်းသည်တစ်ဦး damp လေတိုက်၏မှုတ်များကဲ့သို့မီးဖိုထဲကအလယ်မှာလုပ်, မီးကသူတို့ကိုမထိမခိုက်ခဲ့ပါ, မဟုတ်သလိုသူတို့ကိုညှဉ်းဆဲ, မဟုတ်သလိုမှာအားလုံးသူတို့ကိုနှောင့်ရှက်.
3:51 ထိုအခါဤသုံးပါး, တဦးတည်းသောအသံနှငျ့လျှင်အဖြစ်, ချီးကျူးထောပနာနှင့်ဘုန်းနှင့်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, မီးဖိုအတွက်, ဟုဆို:
3:52 "မင်္ဂလာရှိသင်, သခင်ဘုရားသည်, ငါတို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခငျသညျ: ခြီးမှမျး, နှင့်ဘုန်းကြီးသော, နှင့်အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်ချီးမြှောက်ခြင်း. ထိုအမင်္ဂလာရှိသင့်ရဲ့ဘုန်းအသရေ၏သန့်ရှင်းသောနာမတော်ဖြစ်ပါသည်: ခြီးမှမျး, လူအပေါင်းတို့သည်ချီးမြှောက်, အားလုံးအသက်အရွယ်များအတွက်.
3:53 မင်္ဂလာရှိသင်သည်သင်၏ဘုန်းအသရေ၏သန့်ရှင်းသောဗိမာန်၌ရှိကြ၏: အားလုံးအထက်တွင်ခြီးမှမျးနှင့်အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်ချီးမြှောက်ခြင်း.
3:54 မင်္ဂလာရှိသင့်နိုငျငံတျော၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာရှိပါတယ်: အားလုံးအထက်တွင်ခြီးမှမျးနှင့်အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်ချီးမြှောက်ခြင်း.
3:55 အနက်ဆုံးသောတွင်းကွညျ့မွငျမြားနှငျ့ခေရုဗိမ်ပေါ်မှာထိုင်သူကိုသင်မင်္ဂလာရှိ: ခြီးမှမျးနှင့်အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်ချီးမြှောက်ခြင်း.
3:56 မင်္ဂလာရှိသငျသညျကောငျးကငျဘုံ၏မျက်နှာကြက်၌ရှိကြ၏: ခြီးမှမျးနှင့်ဘုနျးကွီးသောအစဉ်အမြဲ.
3:57 သခင်ဘုရား၏အားလုံးအကျင့်ကိုကျင့်, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:58 သခင်ဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်များ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:59 ကောင်းကင်ဘုံသည်, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:60 မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုအထက်တွင်ဖြစ်ကြောင်းအားလုံးရေကို, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:61 သခင်ဘုရား၏အားလုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:62 နေနှင့်လ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:63 မိုဃ်းကောင်းကင်ကြယ်, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:64 တိုင်းမိုးနဲ့နှင်း, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:65 ဘုရားသခငျသညျအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသက်ရှု, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:66 မီးသတ်နှင့်ရေနွေးငွေ့, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:67 အေးနှင့်အပူ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:68 Dews နှင့်နှင်းခဲ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:69 မိုးနှင်းနှင့်ဆောင်းရာသီ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:70 ရေခဲပြင်နဲ့ဆီးနှင်း, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:71 ညနှင့်ရက်ပေါင်း, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:72 အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကို, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:73 လျှပ်စစ်နှင့်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:74 ထိုပြည်ကိုသခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသော: နှင့်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမြှောက်တော်မူ.
3:75 တောင်တန်း, တောင်, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:76 ဤပွညျ၌ပေါက်သောအရာခပ်သိမ်း, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:77 စမ်းရေ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:78 သမုဒ္ဒရာ, မြစ်ချောင်း, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:79 ဝေလငါးများနှင့်ရေထဲမှာရွှေ့သောသူအပေါင်းတို့သည်အမှုအရာ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:80 ကောငျးကငျဘုံ၌ရှိပျံသန်းသောသူအပေါင်းတို့သည်အမှုအရာ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:81 အားလုံးတောသားရဲများနှင့်တိရစ္ဆာန်များအ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:82 ယောက်ျား၏သား, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:83 ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုထာဝရဘုရား၏အကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသော: နှင့်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမြှောက်တော်မူ.
3:84 သခင်ဘုရား၏ယဇ်ပုရောဟိတ်, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:85 သခင်ဘုရား၏အစေခံကျွန်, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:86 ဖြောဝိညာဉ်များနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:87 နှလုံး၌သန့်ရှင်းသောအခြင်းနှင့်နှိမ့်ချနေသောသူတို့ကို, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ.
3:88 ဟာနနိသည်, အာဇရိ, မိရှေ, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ: အစဉ်အမြဲအပေါင်းတို့ထက်သူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမြှောက်တော်မူ. သူသည်မရဏာနိုင်ငံမှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပြီ, နှင့်သေခြင်း၏လက်မှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, နှင့်မီးလောငျမီးလျှံများအလယ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်, မီးတို့အထဲမှအကြှနျုပျတို့ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့.
3:89 ကောင်းမြတ်တော်မူသောကွောငျ့ထာဝရဘုရားအားကျေးဇူးတင်စကား Give: မိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်သည်အစဉ်အမြဲကြောင့်.
3:90 ကိုင်းရှိုင်းကြသည်သောသူအပေါင်းတို့, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ, ဘုရားတို့၏: သူ့ကိုချီးမွမ်းကြနှင့်ကရုဏာတော်အားလုံးစဉ်မြေးဆက်အဘို့ဖြစ်၏ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုအသိအမှတျပွု။ "
3:91 ထိုအခါမင်းကြီးသည်ဗုခဒ်နေဇာအံ့ဩမိန်းမောခဲ့, သူအလျင်အမြန်ထနှင့်သူ၏မှူးမတ်များကပြောသည်: "ကျနော်တို့မီးအလယ်သို့အိပ်စက်လူသုံးယောက်ကိုနှင်ထုတ်သည်မဟုတ်?"ရှငျဘုရငျကိုဖြေဆိုခြင်း, သူတို့ကဆိုပါတယ်, "စစ်မှန်သော, အိုမင်းကြီး။ "
3:92 သူကလညျး, "အကယ်, ငါကိုမီးအလယ်၌န့်အသတ်များနှင့်လမ်းလျှောက်လူလေးယောက်ကိုကြည့်ပါ, နှင့်မျှမထိခိုက်သူတို့ကို၌တည်ရှိ၏, စတုတ္ထ၏အသွင်အပြင်သညျဘုရားသခငျ၏သားကဲ့သို့ဖြစ်၏။ "
3:93 ထိုအခါဗုခဒ်နေဇာလောင်သောမီး၏မီးဖို၏အဝင်ဝသို့ချဉ်းကပ်, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "ရှာဒ, Meshach, နှင့် Abednego, အဆိုပါအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောဘုရားသခင်၏ကျွန်, ထွက် လာ. ထိုချဉ်းကပ်နည်း။ "ထိုခဏရှာဒ, Meshach, နှင့် Abednego မီးတို့အထဲမှထွက်သွားလေ၏.
3:94 သောအခါဝန်, နှင့်ကဲမငျး, နှင့်တရားသူကြီးများ, နှင့်ရှင်ဘုရင်၏အစွမ်းထက်မှာစုဝေးခဲ့, မီး၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုဆန့်ကျင်တန်ခိုးမရှိသောကြောင့်သူတို့ဒီလူထည့်သွင်းစဉ်းစား, နှင့်၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းမဆံပင်ပူလောင်ခဲ့, နှင့်၎င်းတို့၏ဘောင်းဘီထိခိုက်မခံခဲ့ရ, မီး၏အနံ့သူတို့ကိုပေါ်သို့လွန်ဘူး.
3:95 ထိုအခါဗုခဒ်နေဇာ, စိမ်း, ကပြောပါတယ်, "မင်္ဂလာသူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်, ရှာဒရက်၏ဘုရားသခငျ, Meshach, နှင့် Abednego, မိမိကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွှတ်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုယုံကြည်သောသူအဘယ်သူသည်သူ၏ကျွန်များကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူ. ထိုသူတို့ကရှငျဘုရငျ၏စီရင်ချက်ပြောင်းလဲ, သူတို့အလောင်းတွေအပ်, သူတို့ဘုရားသခင်မှတပါးအဘယ်ဆိုဘုရားကိုဝတ်ပြုသို့မဟုတ်ကိုးကွယ်မဟုတ်ကြောင်းဒါ.
3:96 ထို့ကြောင့်, ဒီအမိန့်ငါ့အားဖြင့်သာတည်တတ်၏: တိုင်းလူ, အနွယ်, နှင့်ဘာသာစကား, သူတို့ရှာဒရက်၏ဘုရားသခငျဆန့်ကျင်စော်ကားမှုပြောပြီအခါတိုင်း, Meshach, နှင့် Abednego, ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်နှင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်များပျက်စီးလိမ့်မည်. ဤနည်းဖြင့်ကယ်တင်နိုင်သူကိုအဘယ်သူမျှမကအခြားဘုရားသခင်ရှိတော်မူသောအမှုဖြစ်၏။ "
3:97 ထိုအခါရှင်ဘုရင်ရှာဒရာထူးတိုး, Meshach, ဗာဗုလုန်ခရိုင်ရှိ Abednego.
3:98 ဗုခဒ်နေဇာ, ဘုရင်, လူမျိုးအပေါင်းတို့မှ, လူအမျိုးမျိုး, နှင့်ဘာသာစကားများ, လောကဓာတ်လုံးကို၌နေသောသူကို, သင်နှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ.
3:99 အဆိုပါအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောဘုရားသခင့ငါနှင့်အတူအပုပ္ပနိမိတ်နှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုပြည့်စုံထားပါတယ်. ထို့ကြောင့်, ကကြွေးကြော်ဖို့ကျွန်မကိုနှစ်သက်ခဲ့ပါသည်
3:100 နိမိတျလက်ခဏာတျော, ကြီးမြတ်သော, နှင့်သူ၏အံ့ဘွယ်သောအမှု, တန်ခိုးကြီးသောသော. သူ၏နိုင်ငံသည်အဘို့ထာဝရနိုင်ငံတော်သို့ဖြစ်ပါသည်, တန်ခိုးမျိုးဆက်မှမျိုးဆက်ဆက်လက်.
4:1 ငါ, ဗုခဒ်နေဇာ, ငါ့အိမျ၌အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါ့နန်းတော်၌ပှား.
4:2 ငါထိတ်လန်တဲ့အိပ်မက်ကိုမြင်လျှင်, ငါ့ခေါင်း၌ငါ၏ငါ့အိပ်ရာပေါ်အတှေးနှင့်ရူပါရုံငါ့ကိုနှောင့်အယှက်.
4:3 ဒါမယ့်အမိန့်ငါ့အားဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်, ဗာဗုလုန်ပညာရှိတို့ကိုအပေါငျးတို့သညျငါ့ရှေ့မှာယူဆောင်သင့်ကြောင်း, သူတို့သညျငါ့ကိုအိပ်မက်မှအဖြေကိုထုတ်ဖေါ်သင့်ကြောင်း.
4:4 ထိုအခါဗျာဒိတ်ခံ, နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာ, ခါလဒဲလူ, နှင့်ဗေဒင်ဟောသောသူထဲသို့ဝင်, ငါသည်လည်းသူတို့၏မျက်မှောက်၌အိပ်မက်အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့, ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါ့ကိုရန်၎င်း၏အဖြေကိုထုတ်ဖေါ်မပြုခဲ့.
4:5 ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုငါ့ရှေ့မှာ လာ., ဒံယလေက, (အဘယ်သူ၏နာမကိုငါ့ဘုရား၏နာမအညီ Belteshazzar ဖြစ်ပါသည်,) အဘယ်သူသည်အလွန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အတွင်းသန့်ရှင်းသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်၏ဝိညာဉ်ရှိပါတယ်, ငါသူ့ကိုမှတိုက်ရိုက်အိပ်မက်ကိုပြောသည်.
4:6 Belteshazzar, ဗျာဒိတ်ခံခေါင်းဆောင်, ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၌သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်၏ဝိညာဉ်ရှိသည်ကိုသိကတည်းက, နှင့်မျှမနက်နဲသောအရာသည်သင်လက်လှမ်းမမှီပါကြောင်း, ငါ၏အအိပ်မက်၏ရူပါရုံငါ့ကိုရှင်းပြ, အရာငါမြင်, သူတို့ကိုမှအဖြေ.
4:7 ဤသူကားငါ၏အိပ်ရာပေါ်မှာငါ့ဦးခေါင်း၏ရူပါရုံခဲ့. ငါကြည့်ရှု, အကယ်စင်စစ်, မြေကြီးတပြင်အလယ်၌သစ်ပင်တပင်ကို, နှင့်၎င်း၏အမြင့်သည်အလွန်ကြီး.
4:8 အဆိုပါသစ်ပင်အကြီးနှင့်ခိုင်ခံ့သောကြီး, နှင့်၎င်း၏အမြင့်မိုဃ်းကောင်းကင်သို့တက်ရောက်ရှိ. ဒါဟာတစ်ခုလုံးကိုမြေကြီးစွန်းမှလူအပေါင်းတို့သည်လမ်းမြင်စေနိုင်.
4:9 ၎င်း၏အရွက်ကိုအလွန်လှပသောခဲ့ကြသည်, နှင့်၎င်း၏အသီးကအလွန်ပေါများခဲ့သည်, ထိုသို့အတွင်းကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးစားစရာဘို့ခဲ့သည်. ကအောက်မှာ, တိရစ္ဆာန်များနှင့်တောသားရဲနေသောခဲ့ကြသည်, နှင့်၎င်း၏အခက်, မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်ခိုလှုံခဲ့ကြ, နှင့်ကနေ, ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့ကိုကျွေးမွေးခဲ့သည်.
4:10 ငါသည်ငါ့စောင်အပေါ်သို့ငါ့အခေါင်းကို၏ရူပါရုံကိုမြင်, အကယ်စင်စစ်, သစျပငျစောငျ့သညျကောငျးကငျမှဆငျးသကျကိုသန့်ရှင်းသောတဦးတည်း.
4:11 သူကကျယ်ကျယ်လောင်လောင်အော်ဟစ်, သူကဒီကပြောပါတယ်: "သစ်ပင်ခုတ်လှဲခြင်းနှင့်အကိုင်းအခက်သုတ်သင်; ၎င်း၏အရွက်ကိုချွတ်လှုပ်နှင့်၎င်း၏အသီးအပွအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ; တောသားရဲသို့ပြေးကြစေ, အောက်အရာများမှာ, အကိုင်းအခက်ထဲကနေနှင့်ငှက်.
4:12 သို့သော်ငြားလည်း, မြေ၌အမြစ်များ၏ငုတ်စွန့်ခွာ, ထိုသို့အပင်တို့တွင်အသံနှင့်ကြေးဝါတစ်တီးဝိုင်းနှင့်အတူခညျြနှောငျခံရပါစေ, အားဖြင့်နီးကပ်သော, ထိုသို့ကောင်းကင်ဘုံ၏နှင်းခြင်းဖြင့်ထိမိပါစေ, နှင့်၎င်း၏အရပ်ဌာနကိုမြေကြီးအပင်တို့တွင်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူဖြစ်ပါစေ.
4:13 သူ၏စိတ်နှလုံးလူ့ဖြစ်ခြင်းကနေပြောင်းလဲသွားပါစေ, နှင့်တစ်ဦးရိုင်းတိရစ္ဆာန်၏နှလုံးအထံတော်သို့ပေးအပ်ခြင်းခံရပါစေ, နှင့်အချိန်ခုနစ်ကာလသူ့ကိုကူးသွားပါစေ.
4:14 ဒါဟာစောင့်ကြည့်၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းမှအမိန့်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်သန့်ရှင်းသူမြား၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အကွှေးကျွောခွငျး, အသက်ရှင်သောသည်အထိအဓိပတိတစ်ခုမှာယောက်ျား၏နိုငျငံတျော၌အစိုးရသောမင်းသည်အသိရကြလိမ့်မည်, သူအလိုတော်အကြင်သူ၏ကပေးလိမ့်မည်ဟု, သူကကျော်နိမ့်ဆုံးလူကိုခန့်ထားမည်။ "
4:15 ငါ, ရှငျဘုရငျသဗုခဒ်နေဇာ, ဒီအိပ်မက်ကိုမြင်လျှင်. ဒါသငျသညျ, Belteshazzar, ငါ့နိုငျငံ၏ပညာရှိအပေါင်းတို့ကိုအကြှနျုပျကိုက၏အဓိပ္ပါယ်ကိုကြေညာရန်မတတျနိုငျသောကွောငျ့လျင်မြန်စွာငါ့ထံသို့အနက်ကိုရှင်းပြရမယ်. သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်၏ဝိညာဉ်သည်သင်တို့အထဲ၌ကြောင့်သင်တို့မူကားနိုင်ကြသည်.
4:16 ထိုအခါဒံယလေက, အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီ Belteshazzar ခဲ့သည်, အကြောင်းကိုတစ်နာရီအဘို့မိမိကိုမိမိအတွင်းမှာစဉ်းစားရန်တိတ်တဆိတ်စတင်ခဲ့သည်, နှင့်သူ၏အကြံအစည်သူ့ကိုစိတ်ပူပန်ခြင်း. သို့သော်ရှင်ဘုရင်ကတုန့်ပြန်, ဟုဆို, "Belteshazzar, အိပ်မက်နှင့်၎င်း၏အနက်ကိုသင်နှောက်ယှက်ပါစေပါဘူး။ "Belteshazzar ကလညျး, "ငါ့အရှင်, အိပ်မက်သင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အဘို့ဖြစ်၏, နှင့်၎င်း၏အနက်ကိုသင်၏ရန်သူတို့ကိုဖြစ်နိုင်သည်.
4:17 သငျသညျကိုမွငျလြှငျသောသစ်ပင်မြတ်သောနှင့်ခိုင်ခံ့သောကြီး; ၎င်း၏အမြင့်ကောင်းကင်သို့ရောက်ရှိ, ထိုသို့လောကဓာတ်လုံးကိုတစ်လျှောက်လုံးမြင်စေနိုင်.
4:18 ထိုအကိုင်းအခက်အလွန်လှပသောခဲ့ကြသည်, နှင့်၎င်း၏အသီးကအလွန်ပေါများ, ထိုသို့အားလုံးကိုစားစရာဘို့ခဲ့. ကအောက်မှာ, လယ်၌ဖြစ်သောသားရဲတို့သည် နေ., နှင့်၎င်း၏အခက်, လေထု၏ငှက်တည်းခို.
4:19 ဒါဟာသင်ဖြစ်ပါသည်, အိုမင်းကြီး, အဘယ်သူသည်ကိုအလွန်တန်ဖိုးထားခဲ့, သင်တို့သည်အားကြီးသောစိုက်ပျိုးခဲ့ကြ. ထိုအသင်သည်သင်၏အာဏာကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြ, ထိုသို့မိုဃ်းကောင်းကင်ကဦးတည်ရောက်ရှိ, နှင့်သင့်စိုးမိုးရေးတပြင်လုံးကိုမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်.
4:20 သို့သျောလညျးရှငျဘုရငျသညျလညျးသစျပငျစောငျ့သန့်ရှင်းသောတဦးတည်းကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းပြောကိုမြင်လျှင်: '' အပင်ကိုခုတ်လှဲကြောင့်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ; သို့သော်, မြေ၌အမြစ်များ၏ငုတ်စွန့်ခွာ, ထိုသို့သံနှင့်ကြေးဝါနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုခံကြစေ, ပတျဝနျးကငျြအပင်တို့တွင်အ, ထိုသို့ကောင်းကင်ဘုံ၏နှင်းနှင့်အတူဖြန်းပါစေ, နှင့်သူ၏နို့တိုက်ကျွေးရေးသားရဲတို့နှင့်အတူရှိပါစေ, အချိန်ခုနစ်ခုကာလသူ့ကိုကူးအထိပါပဲ။ ''
4:21 ဤသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏စီရင်တော်မူခြင်း၏အနက်ကိုဖြစ်ပါတယ်, ငါ့သခင်ရောက်ရှိသည့်, ဘုရင်.
4:22 သူတို့ကလူတို့အထဲကသင့်ကိုထုတ်ပယ်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်သင့်ကျိန်းဝပ်သောတိရစ္ဆာန်နှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့်သင်တစ်ဦးသည်နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားလိမ့်မည်, သငျတို့သကောင်းကင်ဘုံ၏နှင်းနှင့်အတူယစ်မူးလိမ့်မည်. အလားတူပဲ, အချိန်ခုနစ်ခုကာလသင်သည်ကူးသွားပါလိမ့်မယ်, သင်အဓိပတိတစ်ခုမှာယောက်ျား၏နိုငျငံတျောအုပ်စိုးသောကိုမသိမှီတိုင်အောင်, သူအလိုတော်အကြင်သူ၏ကပေးသည်.
4:23 ဒါပေမယ့်, သူက၎င်း၏အမြစ်များများ၏ငုတ်ကြောင်းမှာထားတော်မူပြီးကတည်းက, ကြောင်း, အပင်၏အသီး, ကျန်ရစ်ရပါမည်, သင်၏နိုင်ငံသည်သင်တို့အဘို့ကျန်ကြွင်းပါလိမ့်မည်, သင်တို့သည်တန်ခိုးကိုဘုရားထံမှကြောင်းသဘောပေါက်ကြပြီးနောက်.
4:24 ဒီအတွက်ကြောင့်, အိုမင်းကြီး, ငါ၏အကွံဉာဏျသငျသညျလကျခံပါစေ. နှင့်ဆွမ်းနှင့်သင်၏အပြစ်များကိုရွေးနှုတ်တော်မူ, နှင့်ဆင်းရဲသောဆီသို့ဦးတည်မသနားတျောမူနှင့်သင်၏ဒုစရိုက်သည်. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူသည်သင်၏ပြစ်မှုများခွင့်လွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ "
4:25 ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုရှင်ဘုရင်ကဗုခဒ်နေဇာအပေါ်မှာသက် ရောက်..
4:26 တကျိပ်နှစ်ပါးသောလအဆုံးပြီးနောက်, သူသည်ဗာဗုလုန်၏နန်းတော်၌လမ်းလျှောက်တာခံခဲ့ရ.
4:27 ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်ကျယ်သောအသံထွက်ပြောသော, ဟုဆို, "ဒီအကြီးအဗာဗုလုန်မြို့သည်မဟုတ်, ငါတညျဆောကျပါပွီ, နိုငျငံတျော၏အိမျအဖွစျ, ငါ့တန်ခိုး၏အစွမ်းသတ္တိအားဖြင့်ငါ့အထူးချွန်၏ဘုန်းအသရေအတွက်?"
4:28 ထိုအခါစကားလုံးများကိုရှငျဘုရငျ၏ခံတွင်း၌ရှိနေဆဲစဉ်, ကောင်းကင်ကအသံတော်ကနေဟုန်တည်းပြေးဆင်း, "သင့်ဆီ, အိုမင်းကြီးဗုခဒ်နေဇာ, ကဆိုပါတယ်: 'သငျ့နိုင်ငံတော်သို့ကွာသင့်ထံမှယူပါလိမ့်မည်,
4:29 သူတို့လူတို့အထဲကသင့်ကိုထုတ်ပယ်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်သင့်ကျိန်းဝပ်သောတိရစ္ဆာန်နှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်. သင်တစ်ဦးသည်နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားလိမ့်မည်, ခုနစ်ကြိမ်သငျသညျကူးသွားပါလိမ့်မယ်, သင်အဓိပတိတစ်ခုမှာယောက်ျား၏နိုငျငံတျော၌အုပ်စိုးကြောင်းကိုမသိမှီတိုင်အောင်, သူအလိုတော်အကြင်သူ၏ကပေးသည်။ " '
4:30 အလားတူနာရီ, ဝါကျဗုခဒ်နေဇာတို့အပေါ်မှာပွညျ့စုံခဲ့, သူယောက်ျားအထဲမှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်, သူတစ်ဦးသည်နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားကြ၏, နှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကင်ဘုံ၏နှင်းနှင့်အတူယစ်မူးခဲ့သည်, မိမိဆံပင်ကိုရွှေလင်းတ၏အမွေးအတောင်များကဲ့သို့တိုးမြှင့်သည်အထိ, ငှက်အဲဒီကဲ့သို့သူ၏လက်သည်း.
4:31 ထို့ကြောင့်, ဤသည်နေ့ရက်ကာလရဲ့အဆုံးမှာ, ငါ, ဗုခဒ်နေဇာ, ကောင်းကင်သို့အကြှနျုပျ၏မကျြစိကိုချီ, အကြှနျုပျ၏စိတျကိုငါ့ထံသို့ပကတိဖြစ်လေ၏. ထိုအခါငါအမြင့်ဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, အစဉ်အမြဲငါတည်နေသောသူသူ့ကိုချီးကျူးထောပနာနှင့်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏. တန်ခိုးတော်အဘို့ထာဝရတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏, နှင့်သူ၏နိုင်ငံကိုမျိုးဆက်မှမျိုးဆက်ရန်ဖြစ်ပါသည်.
4:32 မြေကြီးသားအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့သည်မြို့သားတို့သည်ရှေ့တော်၌အဘယ်မျှမဟုတ်သကဲ့သို့မှတ်. သူသည်မိမိအလိုတော်နှင့်အညီပြုမူ, ပဲကောင်းကင်ဘုံ၏အဘို့သန့်ရှင်းသူမြို့သားနှင့်ဝသကဲ့သို့မြေကြီးတပြင်မြို့သားနှင့်အတူ. မိမိလက်ကိုတှနျးလှနျနိုငျသောတယောက်မျှမရှိ, သို့မဟုတ်သူ့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, "သင်သည်ဤအမှုကိုပြုသောအဘယ်ကြောင့်?"
4:33 တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ကြှနျတေျာ့စိတျကိုငါ့ထံသို့ ပြန်., ငါသည်ငါ၏နိုငျငံတျော၏ဂုဏ်အသရေနှင့်ဘုန်းအသရေမှာရောက်ရှိ. အကြှနျုပျ၏အသှငျအပွငျကြှနျုပျအားပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်. အကြှနျုပျ၏မှူးမတ်များနှင့်ငါ၏အကဲမငျးငါ့ကိုလိုအပ်. ထိုအခါငါငါ့နိုငျငံမှပကတိဖြစ်လေ၏, ပင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအာနုဘော်သည်ငါ့ဆီသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်.
4:34 ထိုကြောင့်ငါ, ဗုခဒ်နေဇာ, ယခုခြီးမှမျးခွငျး, နှင့်ချီးမြှင့်, မိုဃ်းကောင်းကင်ဘုရင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, အားလုံးအမှုတော်တို့ကိုနှင့်သူ၏လမ်း၏တရားစီရင်ပိုင်စစ်မှန်တဲ့ကြောင့်, နှင့်ထောင်လွှားခြင်း၌ထွက်သွားသောသူတို့အား, သူကအနိမ့်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်.
5:1 ဗေလရှာဇာ, ဘုရင်, မိမိအမှူးမတ်တထောင်ဘို့ကြီးစွာသောပွဲလုပ်လေ၏, သူတို့ကိုလူတိုင်းတယောက်စီကသူ့အသက်အရွယ်အရသိရသည်သောက်ရ၏.
5:2 ဆိုတော့, သူတို့ယစ်မူးခဲ့ကြသည့်အခါ, သူသည်ရွှေ, ငွေတန်ဆာကိုဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းညွှန်ကြားထား, အရာဗုခဒ်နေဇာ, သူ၏ဖခင်, ဗိမာန်တော်မှသိမ်းခဲ့သော, ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၏, ရှငျဘုရငျကိုနိုင်အောင်, နှင့်သူ၏မှူးမတ်, နှင့်သူ၏မယားများ, နှင့်မောင်းမမိဿံ, သူတို့မှမသောက်ရစေခြင်းငှါ,.
5:3 ထိုအခါရွှေနှင့်ငွေတန်ဆာကိုပေးအပ်ခဲ့ကြ, အရာဗိမာန်တော်မြို့မှသိမ်းခဲ့သောနှင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ခဲ့ပြီးသော, နှင့်ရှင်ဘုရင်, နှင့်သူ၏မှူးမတ်, မယားများ, မောင်းမမိဿံများနှင့်, သူတို့မှကိုသောက်.
5:4 သူတို့ဟာစပျစ်ရည်ကိုသောက်ရ၏, သူတို့ကရွှေအမိမိတို့ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, နှင့်ငွေ, ကြေးဝါကို, သံဖြင့်, သစ်သားနှင့်ကျောက်နှင့်.
5:5 အတူတူတစ်နာရီအတွက်, လက်ချောင်းထင်ရှား, တစ်ဦးယောက်ျား၏လက်ကဲ့သို့, ရိုးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရေးသားခြင်း, မီးခုံဆန့်ကျင်ဘက်, ရှင်ဘုရင်၏နန်းတော်၌. ထိုအခါရှင်ဘုရင်ရေးသားခဲ့သည်သောလက်၏အစိတ်အပိုင်းလေ့လာတွေ့ရှိ.
5:6 ထိုအခါရှငျဘုရငျ၏မကျြနှာကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်, နှင့်သူ၏အကြံအစည်သူ့ကိုနှောင့်အယှက်, သူသည်မိမိ Self-ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရ, နှင့်သူ၏ဒူးထောကျတစျခုကအခြားဆန့်ကျင်ခေါက်.
5:7 ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်နက္ခတ်ဗေဒင်အတွက်ရောက်စေဖို့သူတို့အဘို့ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်အော်ဟစ်, ခါလဒဲလူ, နှင့်ဗေဒင်ဟောသောသူ. ထိုအခါရှင်ဘုရင်ဗာဗုလုန်ပညာရှိကွှေးကျွော, ဟုဆို, "အကြင်သူသည်ဤအစာအရေးအသားကိုဖတ်ရှုနှင့်၎င်း၏အနက်ကိုခရမ်းရောင်ဝတ်လျက်ပါလိမ့်မည်ငါ့အားထင်ရှားစေမည်, နှင့်သူ၏လည်ပင်းပေါ်၌ရွှေစလွယ်ကိုဆွဲရပါလိမ့်မယ်, နှင့်ငါ့နိုငျငံတျော၌တတိယဖြစ်လိမ့်မည်။ "
5:8 ထိုအခါ, ၌ရှင်ဘုရင်၏ပညာရှိအပေါင်းတို့သည် လာ., ဒါပေမဲ့သူတို့မအရေးအသားကိုဖတ်ရှုနိုင်, မရှငျဘုရငျအားအနက်ကိုဘော်ပြတော်.
5:9 ထို့ကြောင့်, ရှငျဘုရငျကိုဗေလရှာဇာအတော်လေးရှုပ်ထွေးခဲ့သည်, နှင့်သူ၏မျက်နှာကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်, ပင်သည်သူ၏မှူးမတ်စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်.
5:10 သို့သော်မိဖုရား, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရှင်ဘုရင်နှင့်သူ၏မှူးမတ်များဖြစ်ပျက်ခဲ့အရာကို, အဆိုပါပွဲသို့အိမ်သို့ဝင်. ထိုမိန်းမသည်ထွက်ပြောသော, ဟုဆို, "အိုမင်းကြီး, အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်. သင်တို့၏အကြံအစည်သငျသညျရောထွေးမခံပါနဲ့, သင်၏မျက်နှာကိုပြောင်းလဲရပါမည်မဟုတ်.
5:11 သင့်ရဲ့နိုငျငံတျော၌လူတရှိပါတယ်, အဘယ်သူသည်မိမိကိုမိမိအတွင်းမှာသန့်ရှင်းသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်၏ဝိညာဉ်ရှိပါတယ်, နှင့်သင့်အဘ၏လက်ထက်ကာလ၌, အသိပညာနှငျ့ဉာဏျပညာကိုယ်တော်၌တွေ့ရှိခဲ့သည်. ရှငျဘုရငျသဗုခဒ်နေဇာများအတွက်, မင်းအဖေ, သူ့ကိုနက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာများ၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခန့်အပ်, ဗဒေ, ခါလဒဲလူ, နှင့်ဗေဒင်ဟောသောသူ, ပင်သင်၏အဘသည်, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, အိုမင်းကြီး.
5:12 ကြီးမြတ်သောဝိညာဉ်သည်, နှင့်အမြော်အမြင်, နှင့်နားလည်မှု, နှင့်အိပ်မက်၏အနက်ကို, နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များတို့၏ပျေါထှနျး, နှင့်အခက်အခဲများမှအဖြေကိုယ်တော်၌တွေ့ရှိခဲ့သည်, ကြောင်း, ဒံယေလ, အဘယ်သူကိုမှရှင်ဘုရင်နာမည်ပေးခဲ့ Belteshazzar. အခုတော့, ထိုကွောငျ့, ဒံယလေကဆင့်ခေါ်ခံရပါစေ, သူသည်အနက်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ "
5:13 ထိုအခါဒံယေလရှင်ဘုရင်ရှေ့တော်၌အတွက်ဆောငျခဲ့. ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်, ဟုဆို, "သင်သည်ဒံယေလဖြစ်ကြသည်, ယုဒအမျိုးသားတို့သည်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော၏သား, အကြှနျုပျအဘသည်ရှင်ဘုရင်သည်ယုဒပြည်မှထွက်ဦးဆောင်တဲ့ဘယ်သူကို?
5:14 ငါသည်သင်တို့ကြားရကြပြီ, သငျသညျဘုရားသခငျ၏ဝိညာဉျတျောရှိသည်သော, ကြောင်းကို သာ. ကြီးမြတ်သည်ပညာအတတ်, အဖြစ်နားလည်မှုနှင့်ဉာဏ်ပညာကို, သင်၌တွေ့ကြပြီ.
5:15 ယခုတွင်ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုနက္ခတ်ဗေဒင်ငါ၏အထံတျောသို့ဝငျကွပါပွီ, ဒီအရေးအသားကိုဖတ်ရှုဖို့နဲ့ငါ့ကိုရန်၎င်း၏အနက်ကိုဘော်ပြတော်မှသကဲ့သို့. ထိုသူတို့ကငါ့ကိုဒီအရေးအသား၏အဓိပ္ပါယ်ကိုပြောပြရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ကြ.
5:16 ထို့အပွငျ, ငါသည်သင်တို့ကိုမထင်ရှားတဲ့အမှုအရာအနက်ကိုဘော်ပြခြင်းနှင့်အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မသင်တို့ကို အကြောင်းပြု. သင်တို့ကြားရပြီ. သို့ဖြစ်., သင်အရေးအသားကိုဖတ်ရှုအတွက်အောင်မြင်ဖို့လျှင်, နှင့်၎င်း၏အနက်ကိုမဘော်မပြအတွက်, သင်မောင်းသောအထည်ကိုဝတ်လျက်, လိမ့်မည်, နှင့်သင်သည်သင်၏လည်ပင်း၌ရွှေစလွယ်ကိုဆွဲပါလိမ့်မယ်, သငျတို့သညျငါ၏နိုငျငံတှငျတတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ "
5:17 ဒီအဒံယေလသည်ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့တိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်ဟု, "သင်၏ဆုလာဘ်ကိုယ်အဘို့ဖြစ်သင့်, နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သား၏လက်ဆောင်များကိုသင်တပါးအားချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ, ငါမူကားသင်ဖို့အစာအရေးအသားကိုဖတ်ကြလိမ့်မည်, အိုမင်းကြီး, သင်တို့ကိုငါမှ၎င်း၏အနက်ကိုဘော်ပြတော်မူမညျ.
5:18 အိုမင်းကြီး, အမြင့်ဆုံးသောဘုရားဗုခဒ်နေဇာအားပေးသော, မင်းအဖေ, နိုငျငံနှင့်တန်ခိုးအာနုဘော်, ဘုန်းအသရေ.
5:19 ထိုအကြောင်းကြောင့်သူ့ကိုအားပေးသောတန်ခိုးအာနုဘော်, လူမျိုးအပေါင်းတို့, အမျိုးအနွယ်, နှင့်ဘာသာစကားများတုနျလှုပျမြားနှငျ့သူ့ကိုကြောက်ကြတယ်. အကြင်သူ၏သူစေလိုကြောင်း, သူကအသေသတ်ခြင်းကို; နှင့်အကြင်သူ၏သူစေလိုကြောင်း, သူဖျက်ဆီးခံရ; နှင့်အကြင်သူ၏သူစေလိုကြောင်း, မိမိချီးမြှောက်ခြင်း; နှင့်အကြင်သူ၏သူစေလိုကြောင်း, သူကလျှော့ချ.
5:20 သို့သော်သူ၏နှလုံးချီခဲ့ပါတယ်နှင့်သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်ထောင်လွှားခြင်း၌ခိုင်မာစေသောအခါ, သူသညျမိမိနိုငျငံတျော၏ပလ္လင်တော်ထဲကဖြုတ်ချခံခဲ့ရနှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေကိုယူသှားခဲ့သညျ.
5:21 ထိုမင်းသည်လူသားတို့ထံမှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်, ဒါသည်သူ၏စိတ်နှလုံးသည်သားရဲတို့နှင့်ထားကြလေ၏, နှင့်သူ၏အိမ်၌ရိုင်းသောမြည်းနှင့်အတူရှိ၏, သူတစ်ဦးသည်နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားကြ၏, နှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကင်ဘုံ၏နှင်းနှင့်အတူယစ်မူးခဲ့သည်, သူကအမြင့်ဆုံးသောယောက်ျား၏နိုငျငံတျောအစိုးပိုင်ရရှိထားသူသဘောပေါက်သည်အထိ, နှင့်မည်သူမဆိုသူဆန္ဒရှိသော်လည်း, သူကကျော်ထားမည်.
5:22 အလားတူပဲ, သငျသညျ, မိမိသားကိုဗေလရှာဇာ, သင်၏နှလုံးနှိမ့်ချကြပြီမဟုတ်, သငျသညျဤအရာအလုံးစုံကိုသိသော်လည်း.
5:23 သို့သော်သင်သည်မိုဃ်းကောင်းကင်၏ထာဝရဘုရားတဘက်၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီမြှောက်ကြပါပြီ. မိမိအိမျ၏တန်ဆာကိုသင်တို့ရှေ့မှာပေးအပ်သည်ပါပြီ. ပြီးတော့သင်, နှင့်သင်၏မှူးမတ်, သင်တို့မယားများ, နှင့်သင်၏မောင်းမမိဿံ, သူတို့မှအရက်မူးသောစပျစ်ရည်များ. အလားတူပဲ, သငျသညျငှအေနတ်ဘုရားချီးမွမ်းခဲ့ကြ, ရွှေနှင့်, ကြေးဝါ, သံဖြင့်, သစ်သားနှင့်ကျောက်နှင့်, အဘယ်သူသည်ကိုတွေ့မြင်ကိုလည်းမ, မကြားနိုင်, မဟုတ်သလိုခံစားရပါတယ်, သို့သျောလညျးသငျ့ရဲ့အသက်ရှုနှင့်သူ၏လက်၌ရှိလူအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်အကျင့်တို့ကိုရရှိထားသူသူကဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြပြီမဟုတ်.
5:24 ထို့ကြောင့်, သူသည်ဤကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်လက်၏အစိတ်အပိုင်းစေလွှတ်တော်မူပြီ, အရာရေးထိုးထားပြီး.
5:25 သို့သော်ဤစီရင်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးကြောင်းအရေးအသားဖြစ်ပါတယ်: လညျဆံမှေး, THECEL, ကားရှေ့မီး.
5:26 ဤစကားလုံးများ၏အနက်တစ်ခုဖြစ်သည်. လညျဆံမှေး: ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုရေတွက်နိုင်ငံတော်သို့သိရသည်ကြောင့်ကိုလက်စသတ်လိုက်ပါတယ်.
5:27 THECEL: သင်အကြေးခွံပေါ်များနှင့်ချိန်တွယ်ချို့တဲ့တွေ့ပါပြီ.
5:28 ကားရှေ့မီး: သင်၏နိုင်ငံသည်ပိုင်းခွဲထားပြီးဒေိနှင့်ပါရှခံရပြီ.
5:29 ထိုအခါ, ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်ပေးသဖြင့်, ဒံယလေကခရမ်းရောင်နှင့်အတူဝတ်ဆင်ခဲ့သည်, ရွှေတစ်ကွင်းဆက်သည်သူ၏လည်ပင်း၌နေရာချခဲ့သည်, ထိုသို့သူနိုငျငံတျော၌တတိယအဖြစ်အာဏာကိုကငျြးပခဲ့သောသူ၏ကွညောခဲ့.
5:30 ထိုနေ့ညဥ့်, ရှငျဘုရငျကိုဗေလရှာဇာခါလဒဲဦးသေဆုံးခဲ့သည်.
5:31 ထိုအဒါရိမေဒိနိုင်ငံတော်သို့မှအောင်မြင်ခဲ့, ခြောက်ဆယ်နှစ်နှစ်၏အသက်အရွယ်မှာ.
6:1 ဒါဟာဒါရိမင်းကြီးအလိုတော်, ဒါသူကနိုင်ငံတော်ကိုကျော်တရာနှစ်ဆယ်ဝန်အဖြစ်ခန့်အပ်, မိမိလူအပေါင်းတို့နိုငျငံတျောသညျတလျှောက်လုံးထားရှိခံရဖို့.
6:2 ထိုကျော်, သုံးခေါင်းဆောင်များ, အဘယ်သူကို၏ဒံယလေကတစျခုဖွစျသညျ, ဝန်သူတို့ကိုတာဝန်ခံပါလိမ့်မယ်နှင့်ရှင်ဘုရင်အဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်.
6:3 ဒါဒံယလေသလူအပေါင်းတို့သည်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအထက်တွင်လွန်ကဲ, ဘုရားသခငျ၏ကြီးမြတ်သောဝိညာဉျကိုကိုယျတျောကိုသောကြောင့်.
6:4 ထို့အပွငျ, တစ်ခုလုံးကိုနိုင်ငံ၌သူ့ကို setting ထည့်သွင်းစဉ်းစားရှငျဘုရငျသ; ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ Daniel ဆန့်ကျင်နေတဲ့တိုင်ကြားမှုကိုရှာဖွေဆည်းကပ်ဝန်ညျကြိနှင့်ရှင်ဘုရင်၏မျက်နှာသာအတွက်. ထိုသူတို့အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုရှာဖွေနိုင်, သို့မဟုတ်ပင်သံသယ, သူကသစ္စာစောင့်သောကြောင့်, နှင့်မျှမတို့အမှားသို့မဟုတ်သံသယသူ့ကို၌တွေ့.
6:5 ထို့ကြောင့်, ဒီလူကဆိုပါတယ်, "ကျနော်တို့ကဒီဒံယလေကဆန့်ကျင်မည်သည့်တိုင်ကြားချက်ကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်မိမိဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားကိုဆန့်ကျင်သရွေ့။ "
6:6 ထိုအခါခေါင်းဆောင်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖယ်ရှငျဘုရငျကို ယူ. ဒီလမ်းအတွက်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်: "ဒါရိမင်းကြီး, အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်.
6:7 သင့်ရဲ့နိုငျငံတျော၏အပေါငျးတို့သခေါင်းဆောင်များ, ကဲမငျးနဲ့ဝန်, အဆိုပါလွှတ်တော်အမတ်များနှင့်တရားသူကြီးများ, တစ်ဦးဧကရာဇ်အမိန့်တော်နှင့်အမိန့်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေသင့်ကြောင်းဆုံးမစကားကိုယူကြပြီ, အရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးအဘို့မဆိုဘုရားသို့မဟုတ်ယောက်ျား၏မည်သည့်အသနားခံစာကိုမေးသူကိုနိုင်အောင်အားလုံး, သင်တို့တွင်အ မှလွဲ., အိုမင်းကြီး, ခွင်ျသေ့တှငျးထဲသို့ချပစ်လိမ့်မည်.
6:8 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, အိုမင်းကြီး, ဒီတရားသဖြင့်စီရင်အတည်ပြုခြင်းနှင့်အမိန့်ရေးရန်, ဘာမေဒိလူအားဖြင့်သာတည်သည်ကိုပြောင်းလဲမရစေခြင်းငှါဒါ, မဟုတ်တစုံတယောက်သောသူသည်ကပြစ်မှားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ "
6:9 ဒီတော့မင်းကြီးသည်ဒါရိမင်းကြီးအမိန့်တော်ထွက် set ကထူထောင်.
6:10 ထိုဒံယေလဒီသင်ယူရသောအခါ, အမည်ရ, ပညတ္တိကျမ်းကိုထူထောင်ခဲ့, မိမိအိမျသို့ဝငျ, နှင့်, ဂျေရုဆလင်သို့ဦးတည်သည်သူ၏အထက်ခန်း၌ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်, သူတနေ့သုံးကြိမ်ချဒူးထောက်, သူသည်မိမိဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကျေးဇူးတင်စကား adored နှင့်ပေး၏, သူသည်ယခင်ကလုပ်ဖို့လေ့ခဲ့ကြောင်းအဖြစ်.
6:11 ထို့ကြောင့်, ဒီလူ, စေ့စေ့မေးမြန်း, ဒံယလေကဆုတောငျးလကျြ, မိမိဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်အောင်ခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိ.
6:12 ထိုသူတို့ကချဉ်းကပ်လာနှင့်အမိန့်ပြန်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. ရှင်ဘုရင်အားပြောသော. "အိုမင်းကြီး, သငျသညျအရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးအဘို့အသီးအသီးနတ်ဘုရားသို့မဟုတ်လူတို့သညျမဆိုရန်တောင်းဆိုမှုစေသည်သူအမိန့်မ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှလွဲပြီး, အိုမင်းကြီး, ခွင်ျသေ့တှငျးထဲသို့ချပစ်လိမ့်မည်ဟု?"ရှင်ဘုရင်သည် replied ထားတဲ့ရန်, ဟုဆို, "ဒီဝါကျမှန်, နှင့်မေဒိလူများ၏အမိန့်အရသိရသည်, အဲဒါကိုချိုးဖောက်ဖို့အပ်မဖြစ်၏။ "
6:13 ထိုအခါသူတို့ကရှင်ဘုရင်ရှေ့တော်၌ကလညျး, "ဒံယလေ, ယုဒအမျိုးသားတို့သည်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော၏သား, ကိုယ်တော်၏တရားအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ပါဘူး, မထူထောင်ခဲ့ကြသောအမိန့်နှင့် ပတ်သက်., ဒါပေမယ့်တနေ့သုံးကြိမ်သူသည်မိမိအအသနားခံဆုတောင်းတယ်။ "
6:14 ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်ဤစကားကိုကြားလျှင်, သူသည်အလွန်စိတျနာ, နှင့်, ဒံယေလကိုယ်စား, သူကသူ့ကိုလွတ်မြောက်စေရန်သူ၏စိတ်နှလုံးသတ်မှတ်ထား, သူကသူ့ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ပင်နေဝင်ချိန်သည်အထိကြိုးစားအားထုတ်.
6:15 သို့သော်ဤလူတို့သညျ, ရှငျဘုရငျကို သိ., သူ့ကိုကပြောပါတယ်, "သင်သိလား, အိုမင်းကြီး, ဒေိနဲ့ပါရှ၏တရားရှငျဘုရငျကိုထူထောင်ထားပါတယ်သောအမိန့်တော်ပြောင်းလဲမရစေခြင်းငှါဖြစ်၏။ "
6:16 ထိုအခါရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်အတိုင်း, သူတို့ကဒံယလေကိုဆောင်ခဲ့နှင့်ခြင်္သေ့တှငျးထဲသို့ချပစ်လှောင်. ထိုအခါရှင်ဘုရင်ဒံယေလကပြောပါတယ်, "သင်၏ဘုရားသခင့, အဘယ်သူကိုသင်အမြဲအစေခံ, သူကမိမိကိုယျကိုသငျသညျလွတ်သွားပါမည်။ "
6:17 နှင့်ကျောက်ကိုယူဆောင်ခဲ့သည်, ထိုသို့တှငျး၏နှုတ်ကျော်ထားရှိခဲ့သည်, သောမိမိလက်စွပ်တော်နှင့်တံဆိပ်ခတ်သည်ရှင်ဘုရင်, နှင့်သူ၏မှူးမတ်များ၏လက်စွပ်နှင့်အတူ, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကဒံယလေဆန့်ကျင်ပြုမူမယ်လို့.
6:18 ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်သူ၏အိမ်တော်သို့ထွက်သွားကြ, သူအစာစားခြင်းမရှိဘဲအိပ်ရာသို့သှားကွ၏, နှင့်အစားအစာသူ့ရှေ့မှာမသတ်မှတ်ခံခဲ့ရ, ထိုမှတပါး, ပင်အိပ်ပျော်ခြင်းသူ့ထံမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်.
6:19 ထိုအခါရှင်ဘုရင်, ပထမဦးဆုံးအလင်းမှာမိမိကိုမိမိတက်လာပြီ, ခွင်ျသေ့တှငျးမှအလျင်အမြန်သွား၏.
6:20 ထိုအခါတွင်းအနီးသို့လာမယ့်, သူဒံယေလကိုမျက်ရည်တစ်အသံနှင့်ဟစ်နှင့်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်. "ဒံယလေ, အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ကျွန်သည်, သင်တို့၏ဘုရားသခင်, သငျသညျအစဉ်အမြဲအစေခံတော်မူသော, သူသည်ခြင်္သေ့ကနေသင်တို့ကိုလွတ်နိုင်ကြထားပြီးသင်ယုံကြည်ကြဘူး?"
6:21 ဒံယလေ, ရှငျဘုရငျဖွဆေို, ကပြောပါတယ်, "အိုမင်းကြီး, အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်.
6:22 အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျသညျမိမိကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွှတ်ထားပါတယ်, သူသည်ခြင်္သေ့၏ပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်, သူတို့ငါ့ကိုထိခိုက်ကြပြီမဟုတ်, သူ့ရှေ့မှာတရားမျှတမှုကိုငါ့ကိုရှာတွေ့ထားပြီဖြစ်သောကြောင့်, နှင့်, ပင်ကိုသင်တို့ရှေ့မှာ, အိုမင်းကြီး, ငါမပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီ။ "
6:23 ထိုအခါရှင်ဘုရင်ကိုသူ့အဘို့အလွန်အားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏, သူဒံယေလတွင်းထဲကယူသင့်ကြောင်းအမိန့်တော်အတိုင်း. နှင့်ဒံယေလတွင်းထဲကယူခဲ့ပါတယ်, နှင့်မျှမတို့ဒဏ်ရာသူ့ကို၌တွေ့, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူသည်မိမိဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်.
6:24 ထို့အပြင်, ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်ဖြင့်, သူတို့အားယောက်ျားဒံယလေကစွပ်စွဲခဲ့သောယူဆောင်ခဲ့သည်, သူတို့ခြင်္သေ့ '' တွင်းထဲသို့ချပစ်လေ၏, သူတို့, နှင့်သူတို့သား, သူတို့ရဲ့ဇနီး, ခြင်္သေ့ကသူတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိအပေါင်းတို့နှင့်အရိုးတို့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရမီနှင့်သူတို့တှငျး၏အောက်ခြေမရောက်နိုင်ဘူး.
6:25 ထိုအခါရှင်ဘုရင်ကဒါရိမင်းကြီးလူမျိုးအပေါင်းတို့မှရေးသားခဲ့သည်, အမျိုးအနွယ်, နှင့်ဘာသာစကားများပြည်တရှောက်လုံး၌. "မေလငြိမ်းချမ်းရေးသင်တို့နှင့်အတူရှိတိုးမြှင့်ခံရ.
6:26 ဒါဟာဤဥပဒေငါ့အမိန့်တော်အားဖြင့်မြဲမြံစွာတည်နေသည်, ငါ့အလိုရှိသမျှအင်ပါယာနှင့်ငါ့နိုငျငံတျော၌, သူတို့ဒံယေလ၏ဘုရားသခငျတုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့ကိုစတင်ရကြလိမ့်မည်. သူသည်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်သောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်, နှင့်သူ၏နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပစ်မည်မဟုတ်ပါ, နှင့်သူ၏အာဏာကိုအစဉ်အမြဲကြာရှည်ဦးမည်.
6:27 သူကလစ်ဘရယ်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူနှင့်မြေကြီးပေါ်မှာအရိပ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုဖျော်ဖြေ, သူခြင်္သေ့ '' တွင်းကနေဒံယလေကလွတ်မြောက်လာပါပြီ။ "
6:28 ထို့နောကျ, ဒံယလေကကုရု၏နန်းစံသည်အထိဒါရိမင်းကြီးနန်းစံတဆင့်ဆက်လက်, ပါရှန်း.
7:1 ဗေလရှာဇာ၏ပထမနှစျတှငျ, ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်, ဒံယလေသသည်သူ၏အိပ်ရာအပေါ်သူ၏ဦးခေါင်း၌အိပ်မက်နှင့်ရူပါရုံကိုမြင်. နှင့်, အိပ်မက်ချရေးသားခြင်း, သူကတစ်ဦးစုံစုံထုံးစံ၌ကနားလည်သဘောပေါက်, ဆိုတော့, tersely ကစုစည်းတင်ပြရန်, ဟုသူကပြောသည်:
7:2 ငါညမှာငါ့အရူပါရုံ, အကယ်စင်စစ်, မိုဃ်းကောင်းကင်လေလေးပါးပင်လယ်ကြီးအပေါ်သို့စစ် တိုက်..
7:3 လေးယောက်သားရဲ, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသော, ပင်လယ်မှတက်ပြီ.
7:4 ပထမဦးဆုံးခြင်္သေ့ကဲ့သို့ကြီးနှင့်ရွှေလင်းတအတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်. ငါက၎င်း၏အတောင်ပံချွတ်ကိုနှုတ်သကဲ့သို့စောင့်ကြည့်, ထိုသို့မြေကြီးထဲကထမြောက်တော်မူခြင်းနှင့်လူယောက်ျားကဲ့သို့၎င်း၏ခြေထောက်ပေါ်ရပ်နေသည်, တစ်ယောက်ျား၏နှလုံးသည်အားပေးပြီးမှခဲ့သည်.
7:5 ထိုအခါ, အခြားသောသားရဲတကောင်, ဝံမကဲ့သို့, တဘက်တချက်၌ရပ်လျက်, ရန်, နှင့်သုံးတန်းက၎င်း၏နှုတ်၌နှင့်ယင်း၏သွားများရှိ, ထိုသူတို့ကဤလမ်းအတွက်ကြောင့်အားမိန့်တော်: "ထလော့, အများကြီးအသားကိုစား။ "
7:6 ထိုနောက်မှ, ငါကြည့်, အကယ်စင်စစ်, ကျားသစ်ကဲ့သို့အခြားသော, ထိုသို့ငှက်ကဲ့သို့အတောင်, ဒါကြောင့်အပျေါမှာလေး, လေးယောက်အကြီးအကဲမျ​​ားသားရဲ၏ပေါ်မှာ, နှင့်အာဏာအဲဒါကိုပေးခဲ့သော.
7:7 ထိုနောက်မှ, ငါညဉ့်ရူပါရုံ၌စောင့်ကြည့်, အကယ်စင်စစ်, စတုတ္ထသားရဲသည်, ကြောက်မက်ဘွယ်သောမရှိသေးပါအံ့ဖွယ်, အလွန်အားကြီးသော; ဒါကြောင့်ကြီးစွာသောသံအံသွားတာပေါ့, အစာစားခြင်းမရှိသေးပါနှိမ်နင်း, နှင့်သူ၏ခြေနှင့်အကြွင်းကိုချနင်း, ဒါပေမယ့်အခြားတစ်တောသားရဲနှင့်မတူဘဲခဲ့, ငါရှေ့မှာမြင်ခဲ့ရတယ်, ထိုသို့ချိုဆယ်ချောင်းရှိခဲ့ပါတယ်.
7:8 ငါဦးချိုတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, အကယ်စင်စစ်, နောက်တစ်ခုအနည်းငယ်သာဦးချိုကိုသူတို့အထဲကမြင့်တက်လာ. ထိုအခါပထမဦးဆုံးဦးချိုတို့ကိုသုံးခုက၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ထွက်အမြစ်တွယ်ခဲ့ကြ. ထိုအခါ, လူ၏မျက်စိသည်နှင့်တူမျက်စိသည်ဤဦးချိုကိုရှိကြ၏, နှင့်နှုတ်အမှုအရာသဘာဝစကားပြော.
7:9 ရာဇပလ္လင်ကို set up မှီတိုင်အောင်ငါကြည့်, ကာလရှေးဟောင်းထိုင်ကြ၏. သူလည်းမိမိအဝတ်သည်လည်းမိုဃ်းပွင့ကဲ့သို့အတောက်ပခဲ့, စင်ကြယ်သောသိုးမွေးကဲ့သို့နှင့်သူ၏ဦးခေါင်းကို၏ဆံပင်; သူ၏ရာဇပလ္လင်ကိုမီးလျှံကြီး, ယင်း၏ရထားဘီးကိုမီးပေါ်မှာတင်ထားခဲ့.
7:10 မီးစတစ်မြစ်ကိုမိမိအထံတော်မှထွက်တဟုန်တည်းပြေး. သူ့ကိုလုပ်ကျွေးသူထောင်ပေါင်းများစွာအပေါ်သို့ထောင်ပေါင်းများစွာကို, ထောင်နှင့်ချီတသောင်းကြိမ်ရာနဲ့ချီတဲ့သူ့ရှေ့မှာတက်ရောက်ခဲ့သည်. အဆိုပါတရားခွင်စတင်ခဲ့, နှင့်စာအုပ်များဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်.
7:11 ငါကွောငျ့ဦးချိုကိုစကားပြောခဲ့သည့်စကားကွီး၏စကားသံ၏စောင့်ကြည့်, ငါသည်ထိုသားရဲသည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်, နှင့်၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်ကပျက်ပြီခဲ့ပြီးမီးရှို့ခံရဖို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့.
7:12 အလားတူပဲ, အခြားတစ်တောသားရဲ၏တန်ခိုးကိုပယ်, အသက်ရှင်ခြင်းကန့်သတ်အချိန်သူတို့ကိုခန့်အပ်ခဲ့သည်, တစ်ကြိမ်နှင့်အခြားမှီတိုငျအောငျ.
7:13 ငါကြည့်, ထိုကွောငျ့, ညဉ့်ရူပါရုံ၌, အကယ်စင်စစ်, မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးနှင့်အတူ, ရောက်ရှိခဲ့သည်လူသားတူသောသူတဦး, သူကကာလ၏ရှေးခေတ်မှအပေါင်းတို့သည်လမ်းကိုချဉ်းကပ်, သူတို့သညျရှေ့တော်၌ပေးအပ်ချီးမြှ.
7:14 သူသည်အာဏာကိုပေး၏, ဂုဏ်အသရေ, နှင့်နိုင်ငံတော်သို့, နှင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့, အမျိုးအနွယ်, ဘာသာစကားကိုသူ့ကိုဝတ်ပြုကြလိမ့်မည်. တန်ခိုးတော်အားထာဝရတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏, အရာမပယ်ရှားမည်မဟုတ်, နှင့်သူ၏နိုင်ငံတော်သည်, ယိုယွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေတ.
7:15 ငါ့ဝိညာဉ်သည်အလွန်ကြောက်ခဲ့. ငါ, ဒံယလေက, ဤအရာတို့ကိုမှာကြောက်ခဲ့, ငါ့ခေါင်း၏ထူးဆန်းသောရူပါရုံကိုငါ့နှောင့်အယှက်.
7:16 ငါအမှုထမ်းတဦးချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ထိုအကွောငျးအရာအလုံးစုံတို့ကိုသူ့ထံမှသမ္မာတရားကိုမေးလျှင်,. သူကကျွန်မကိုစကားအနက်ကိုပြောပါတယ်, သူကငါ့ကိုအညွှန်ကြားထား:
7:17 "ဒီလေးကြီးမြတ်တောသားရဲလေးတိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြသည်, မြေကြီးမှထမြောက်ကြလိမ့်မည်ဟူသော.
7:18 သို့ရာတွင်နိုင်ငံတော်သို့လက်ခံရရှိမည်သူအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသူအဖြစ်ပါသည်, ထိုသူတို့ကဤလူမျိုးမှနိုင်ငံတော်သို့ကိုင်မည်, နှင့်အစဉ်အမြဲအစဉ်အမြဲ။ "
7:19 ထိုနောက်မှ, ငါစတုတ္ထသားရဲသည်နှင့် ပတ်သက်. စေ့စေ့လေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြ, ခပ်သိမ်းသောအမှုထဲကအလွန်ကွဲပြားခြားနားခဲ့သည့်, အလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်သော; သူ၏သွားနှင့်ခြေသည်းသံ၏ခဲ့ကြ; သူကိုကျွမ်းလောင်ခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ, သူသည်မိမိခြေနှင့်နင်းမိခြင်းနှင့်ကျန်ရှိသော;
7:20 နှင့်ချိုဆယ်ချောင်းနှင့် ပတ်သက်., တော်မူသောသူသည်သူ၏ခေါင်းပေါ်၌ရှိခဲ့, နှင့်အခြားသောနှင့် ပတ်သက်., အရာပေါက်ခဲ့, သုံးဦးချိုတို့ကိုကျဆင်းမတိုင်ခင်, နှင့်မျက်စိခဲ့သောကြောင့်ဦးချိုကိုနှင့်နှုတ်နှင့် ပတ်သက်. ကြီးစွာသောအရာတို့ကိုစကားပြော, ကြွင်းသောအရာထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်ခဲ့ပြီးသော.
7:21 ငါကြည့်, အကယ်စင်စစ်, ကြောင်းဦးချိုသန့်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်ဖန်ဆင်းတော်နှင့်သူတို့ကိုကျော်နိုင်ကြ,
7:22 ကာလ၏ရှေးဟောငျးအီဂ လာ. , အဓိပတိ One ၏သန့်ရှင်းသူတို့ကိုစီရင်တော်မူခြင်းမှပေး၏မှီတိုငျအောငျ, နှင့်အချိန်ရောက်ရှိလာခဲ့, နှင့်သန့်ရှင်းသောသူတို့ကိုနိုင်ငံတော်သို့ရရှိသော.
7:23 ထိုသို့ဟုသူကဆိုသည်, "စတုတ္ထသားရဲသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောစတုတ္ထနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်, တိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသော, နှင့်မြေတပြင်လုံးလောင်လိမ့်မည်, ထိုသို့နင်းနဲ့နှိပ်စက်မည်.
7:24 ထို့အပြင်, တူညီသောနိုငျငံတျော၏ချိုဆယ်ချောင်းမင်းကြီးဆယ်ပါးဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့်အခြားသူတို့နောက်ထမည်, သူကသူ့ရှေ့မှာမြားထက်တန်ခိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မည်, သူကရှင်ဘုရင်သုံးပါးတို့ကိုနှိမ့်ချလိမ့်မည်ဟု.
7:25 သူသည်ထိုအအဓိပတိတစ်ခုမှာဆန့်ကျင်သောစကားကိုပြောလိမ့်မယ်, အမြင့်ဆုံးသော၏သန့်ရှင်းသူတို့ကိုပင်ပန်းလိမ့်မယ်, သူကကပ်ကာလနှင့်ဥပဒေများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ယူမယ်လို့အဘယ်သို့သောအကြောင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်, သူတို့ကတစ်ဦးအချိန်တိုင်အောင်သူ့လက်သို့အပ်ပေးတော်မူလိမ့်မည်, နှင့်အချိန်များ, တဝက်အချိန်.
7:26 ထိုအခါရုံးတင်စစ်ဆေးကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်မိမိတန်ခိုးကိုယူသှားစေခြင်းငှါ,, နှင့်ခံရ, နှင့်အဆုံးမှလူအပေါင်းတို့သည်လမ်း ပြင်. မရပါ.
7:27 သို့သျောလညျးနိုငျငံတျောသညျ, နဲ့ပါဝါ, ကြောင်းကိုနိုငျငံတျော၏တန်ခိုးအာနုဘော်, ခပ်သိမ်းသောကောင်းကင်အောက်မှအရာဖြစ်ပါသည်, အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏သန့်ရှင်းသူတို့၏လူတို့သည်အားပေးရလတံ့, အဘယ်သူ၏နိုင်ငံတော်သည်နိစ္စထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၏, ရှင်ဘုရင်အပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုဝတ်ပြုပြီးနာခံမည်။ "
7:28 ဒီမှာမက်ဆေ့ခ်ျ၏အဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ငါ, ဒံယလေက, ကိုအလွန်ငါ၏အကြံအစည်အားဖြင့်နှောင့်အယှက်ခဲ့သည်, နှင့်ငါ့ခံစားချက်ငါ့ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်, ငါမူကားငါ့နှလုံးထဲမှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုထိန်းသိမ်းထား.
8:1 ဗေလရှာဇာ၏နန်းစံရှင်ဘုရင်၏တတိယနှစ်တွင်, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုငါ့ထံသို့ထင်ရှားပေါ်ထွန်း. ကျွန်မအစအဦးတွင်တွေ့မြင်ဖူးသောအရာပြီးနောက်, ငါ, ဒံယလေက,
8:2 ငါ၏အရူပါရုံကိုမြင်, ငါရှုရှန်၏မြို့တော်၌ပါသော, ဧလံ၏ဒေသတွင်း၌အရာဖြစ်ပါသည်, သေးငါ Ulai တံခါးကျော်သောရူပါရုံကိုမြင်.
8:3 ငါ့မျက်စိနှင့်မြင်ချီ, အကယ်စင်စစ်, တစ်ခုတည်းသိုးထီးတကောင်ကို၎င်းနားမှာရှေ့မှာရပ်, နှစ်ခုမြင့်မားသောဦးချိုရှိခြင်း, တကအခြားထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့တုန်းပဲမြင့်မားတဲ့ကြီးထွားလာ.
8:4 ထိုနောက်မှ, ငါသိုးကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကဆန့်ကျင်သည်သူ၏ဦးချိုပြင်းကိုမြင်လျှင်, နှင့်မြောက်ကိုရီးယားဆန့်ကျင်, နှင့်ဒီဂရီမျဉ်းဆန့်ကျင်, သားအပေါင်းတို့သည်သားရဲတို့သည်ဆီးတားနိုင်နိုင်ဘူး, မဟုတ်သလိုသူ့လက်မှလွတ်မြောက်လာလိမ့်, မိမိအလိုတော်နှင့်အညီခဲ့ဘူး, သူကြီးအဖြစ်လာခဲ့သည်.
8:5 ထိုအခါငါနားလည်သဘောပေါက်, အကယ်စင်စစ်, သူမဆိတ်အကြားတစ်ဦးကိုသူ-ဆိတ်သငယ်တစ်ခုလုံးမြေကြီးမျက်နှာအထက်အနောက်နိုင်ငံများမှ လာ., သူသည်မြေပြင်မထိခဲ့ဘူး. ထို့အပွငျ, ထိုဆိတ်ကသူ့မျက်စိကြားမှာတစ်ဉီးဦးချိုခဲ့.
8:6 ထိုအခါလူအပေါင်းတို့ကိုလမ်းဦးချိုခဲ့သောသိုးထီးထံသို့ ဝင်., ငါတံခါးရှေ့မှာရပ်နေမြင်ဘူး, မိမိအစွမ်းသတ္တိ၏အင်အားအတွက်သူ့ကိုဆီသို့သို့ပွေးလေ၏.
8:7 သူသည်ထိုအသိုးထီးတကောင်ကိုအနီးအပါးသို့ချဉ်းကပ်လာသောအခါ, သူကသူ့ကိုဆန့်ကျင်သည်စိတ်ပူပန်ခဲ့သည်, သူသည်သိုးထီးတကောင်ကိုလုပ်ကြံ, နှင့်သူ၏ချိုနှစ်ချောင်းကိုချိုးဖဲ့, နှင့်သိုးကိုဆီးတားနိုင်နိုင်ဘူး, သူသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်သူ့ကိုနှိမ့်ချပြီးမှ, သူကသူ့ကိုနင်း, အဘယ်သူမျှမကသူ၏လက်မှသိုးကိုလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်.
8:8 သို့သော်သူမဆိတ်တို့တွင်သူ-ဆိတ်သငယ်ကိုအလွန်ဖြစ်လာခဲ့သည်, သူသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပြီးမှ, အကြီးအချိုကိုချိုးဖဲ့ခဲ့သည်, ဦးချိုလေးချောင်းကိုကောင်းကင်ဘုံ၏လေးမျက်နှာအားဖွငျ့ကအောက်ထခဲ့သည်.
8:9 ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတဦးတည်းထံမှထွက်တဦးတည်းအနည်းငယ်သာဦးချိုတို့သည် လာ., ထိုသို့ဒီဂရီမျဉ်းဆန့်ကျင်ကြီးမြတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်အရှေ့ဆန့်ကျင်, နှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုဆန့်ကျင်.
8:10 ထိုသို့ပင်ကောင်းကင်ဘုံ၏အစွမ်းသတ္တိကိုဦးတည်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်, ထိုသို့ခွန်အားနှင့်ကြယ်သောသူတို့အား ချ., ထိုသို့သူတို့ကိုနင်း.
8:11 ထိုသို့ချီးမြှင့်ခဲ့သည်, ပင်အစွမ်းသတ္တိ၏ခေါင်းဆောင်မှ, ထိုသို့ကွာသူ့ကိုမှအစဉ်အမြဲပူဇျောသက်ကာကိုယူ, နှင့်သူ၏သန့်ရှင်းရာဌာနကိုချချပစ်.
8:12 ထိုအခါအားသာချက်အစဉ်အမြဲယဇျပူဇျောဆန့်ကျင်သူ့ကိုအားပေးပြီးမှခဲ့သည်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပြစ်များ, တရားနှင့်သစ္စာတရားကိုမြေပေါ်မှာလှဲလုပ်ကြံပါလိမ့်မည်, သူပြုမူပါလိမ့်မယ်, သူအကြံထမြောက်ရသောအပါလိမ့်မယ်.
8:13 ထိုအခါငါစကားပြောသန့်ရှင်းသူတစ်ဦးကိုကြား, တသူတော်စင်တပါးအားဆိုပါတယ်, (ငါသူစကားပြောခဲ့ပါသည်ဘယ်သူကိုမှမသိရ,) "ဘာရူပါရုံအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အစဉ်အမြဲပူဇျောသ, နှင့်လူဆိတ်ညံရာ၏အပြစ်ဖြေ, အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့, နှင့်သန့်ရှင်းရာဌာနနှင့်အစွမ်းသတ္တိ၏, အရာနင်းလိမ့်မည်?"
8:14 သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်, "ညဦး မှစ. နံနက်တိုင်အောင်, နှစ်ထောင်သုံးရာရက်ပေါင်း, ဒါသန့်ရှင်းရာဌာနစင်ကြယ်စေပါလိမ့်မယ်။ "
8:15 သို့သော်ထိုသို့ လာ., သောအခါငါ, ဒံယလေက, ထိုရူပါရုံကိုမွငျလြှငျ, နားလည်မှုကြောင့်ဆည်းကပ်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, တစ်ဦးယောက်ျား၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တူသောငါ့မျက်မှောက်၌အရာတစ်ခုခုအတွက်ထိုအရပ်၌ရပ်.
8:16 ထိုအခါငါ Ulai အတွင်းယောက်ျား၏အသံကိုကျွန်တော်ကြားလျှင်, သူထွက်ခေါ်ဆိုပါတယ်, "ဂါဗြေလ, ဒီတစ်ခုဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုနားလည်ပါစေ။ "
8:17 သူသညျ လာ. ငါရပ်ဘယ်မှာမှလာမယ့်မတ်တပ်ရပ်, သူချဉ်းကပ်လာသောအခါ, ငါသည်ငါ့မျက်နှာပေါ်မှာလှဲ, တုန်လှုပ်ခြင်း, သူငါ့အားပြောဆို၏, "နားလည်သည်, အချင်းလူသား, အဆုံးကာလ၌ထိုရူပါရုံပွညျ့စုံမညျမည်။ "
8:18 ထိုမင်းသည်ငါ့ထံသို့ပြောသောအခါ, ငါမြေပြင်ပေါ်သို့ရှေ့ဆက်ကျဆင်း, ဒါသူသည်ငါ့ကိုတို့ထိခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ငါ့ကိုမတ်တပ်ရပ်.
8:19 ထိုမင်းသည်ငါ့အားပြောဆို၏, "ငါသည်အနာဂတ်ကာလအရာအစောပိုင်းကဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသင်တို့၌ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်, အချိန်ကို၎င်း၏အဆုံးရှိပါတယ်.
8:20 သိုးသည်, ရာသငျသညျ, ဦးချိုရှိသည်ကိုမြင်လျှင်, ဒေိနဲ့ပါရှလသရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏.
8:21 ထို့အပွငျ, သူမဆိတ်တို့တွင်သူ-ဆိတ်သငယ်ကိုဟေလသရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏, နှင့်အကြီးအချိုကို, အရာသည်သူ၏မျက်စိကြားမှာခဲ့သည်, တူညီသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ပထမဦးဆုံးအရှငျဘုရငျသ.
8:22 ထိုအချိန် မှစ., ချိုးဖဲ့ခံတော်မူပြီးမှ, ယင်း၏အရပျ၌လေးယောက်ရှိပါတယ်ကြီးပြင်း, လေးရှငျဘုရငျတို့သညျမိမိလူမြိုးမှထဦးမည်, မဟုတ်မိမိခွန်အား၌.
8:23 ထိုသူတို့၏မင်းနန်းစံပြီးနောက်, ဒုစရိုက်သည်တိုးပွားလာပါလိမ့်မည်သည့်အခါ, အရှက်မရှိသောမျက်နှာနှင့်နားလည်မှုညှိနှိုင်းမှုတစ်ရှင်ဘုရင်တယောက်ထမည်.
8:24 နှင့်သူ၏အားသာချက်ကိုခိုင်ခံ့စေပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်မရအင်အားသည်သူ၏ကြင်ကြင်နာနာနေဖြင့်, သူယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါလိမ့်မည်အဘယ်အရာကိုထက်အခြား, အရာအားလုံးကိုတိုက်ဖျက်ပါလိမ့်မည်, သူအကြံထမြောက်ရသောအပါလိမ့်မယ်, သူပြုမူပါလိမ့်မယ်. သူသည်ထိုအအောင်မြင်သောနှင့်သန့်ရှင်းသူတို့၏လူတွေကစီရင်မည်,
8:25 အလိုတော်နှင့်အညီ, ပုန်ကန်မှု, မိမိလက်ဖြင့်ပဲ့ထိန်းပါလိမ့်မည်. နှင့်သူ၏နှလုံးဖောင်းပါလိမ့်မည်, နှင့်အရာခပ်သိမ်း၏အကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်အားဖြင့်သူသည်အများသောကိုသတ်လိမ့်မယ်, သူမင်း၏သခင်တဘက်၌ထလိမ့်မယ်, သူတစ်ဦးလက်ခြင်းမရှိဘဲဆင်းခေါက်ပါလိမ့်မည်.
8:26 ညဦး၏ရူပါရုံနှင့်နံနက်သည်, အရာအားကြားပြောလေ၏, မှန်. ထို့ကြောင့်, သငျသညျထိုရူပါရုံတံဆိပ်ခတ်ထားရမယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, နေ့ရက်များစွာပြီးနောက်, ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။ "
8:27 ထိုအခါငါ, ဒံယလေက, languished နှင့်အချို့သောနေ့ရက်ကာလအဘို့နေမကောင်းခဲ့သည်, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ချီပြီးမှ, ငါရှင်ဘုရင်၏အမှုတော်တို့ကိုဖျော်ဖြေ, ငါဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုမိန်းမောတွေဝေခဲ့, ထိုသို့အနက်ကိုဘော်ပြနိုင်သူကိုအဘယ်သူမျှမခဲ့.
9:1 ဒါရိမင်းကြီး၏ပထမနှစျတှငျ, အာရွှေရု၏သား, မေဒိအမျိုးအနွယ်၏, သူသည်ခါလဒဲ၏နိုငျငံတျောအုပျစိုး,
9:2 နန်းစံနှစ်ကတဦးတည်းအတွက်, ငါ, ဒံယလေက, စာအုပ်တွေထဲမှာနှစ်ပေါင်းအရေအတွက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်, ယေရမိသို့ရောက် လာ. ရသောသခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုရည်မှတ်, ပရောဖကျ, ဂျေရုဆလင်များ၏လူဆိတ်ညံရာအနှစ်ခုနစ်ဆယ်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဟု.
9:3 ထိုနောက်မှငါသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ငါ့မျက်နှာကိုမသတ်မှတ်, ဘုရားရေ, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အတူအသနားခံကိုမေးနှင့်အလုပ်, လျှော်တေအဝတ်ကို, ပြာ.
9:4 ထိုနောက်မှငါသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းပဌနာ, ဘုရားရေ, ငါဝန်ခံ, ငါကဆိုပါတယ်, "တောင်းပန်ပါတယ်, အိုထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်, အကြီးနှင့်အကြောက်မက်ဘွယ်သော, သငျသညျကိုခစျြနှငျ့သငျ့ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သောသူတို့အဘို့ပဋိညာဉ်တရားကိုကရုဏာထိန်းသိမ်း.
9:5 ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားပါပြီ, ကျနော်တို့ဒုစရိုကျကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြ, ကျနော်တို့ impiously ပြုမူခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြ, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ပညတ်တို့ကိုကျင့်အဖြစ်သင့်ရဲ့စီရငျခကျြကနေလမ်းလွဲကြပြီ.
9:6 အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ကျွန်ကိုနာခံခဲ့ကြပြီမဟုတ်, ပရောဖကျအ, ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်တို့သည်သင်၏နာမကိုဟောကြသူ, ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များ, ငါတို့ဘိုးဘေးများ, ပွညျသူပွညျသားနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်.
9:7 သင့်ဆီ, အိုထာဝရဘုရား, တရားမျှတမှုကိုဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာ၏ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပါသည်, ယုဒလူတို့သညျအဘို့ဤနေ့၌ဖြစ်သကဲ့သို့, ယေရုရှလင်မြို့နှင့်မြို့သား, ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို, အနီးနေသောသူတို့ကိုနှင့်ဝေးနေသောသူတို့အဘို့, သူတို့ကိုသင်နှင်လိုက်ရာမှအပေါငျးတို့သမြေများအတွက်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသငျသညျပွစျမှားမိသောအားဖြင့်သူတို့အပြစ်၏.
9:8 အိုထာဝရဘုရား, ကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာ၏ရှုပ်ထွေးမှုများပိုင်: ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်တို့သည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များ, ငါတို့ဘိုးဘေးများနှင့်, သူကိုပြစ်မှားပါပြီ.
9:9 သင်တို့မူကားရန်, အကြှနျုပျတို့ဘုရားသခငျထာဝရဘုရား, ကရုဏာတရားနှင့်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှဆုတ်ခွာပြီ,
9:10 ငါတို့သည်သခင်ဘုရား၏စကားသံကိုနားမထောင်ကြ, ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ, သူ၏တရား၌ကျင်လည်သကဲ့သို့, မိမိကျွန်အားဖြင့်ငါတို့အဘို့အထူထောင်ထားတဲ့, ပရောဖကျအ.
9:11 ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်၏တရားကိုလွန်ကျူးခဲ့ပြီးလွှဲထားပါတယ်, သင့်ရဲ့အသံကိုနားမထောငျ, ဒါအပြစ်နှင့်ကျိန်ခြင်းအ, မောရှေ၏စာအုပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏သော, ဘုရားသခင်၏ကျွန်သည်, အကြှနျုပျတို့အပျေါနှိမ့်ချရွာစေခဲ့ပါသည်, ငါတို့သည်သူ့ကိုအပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်.
9:12 ထိုမင်းသည်သူ၏စကားပြည့်စုံပြီ, ပေးသောသူကိုငါတို့အပေါ်မှာငါတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောငါတို့၏ခေါင်းဆောင်များကျော်အမိန့်တော်ရှိ၏, သူကကျွန်တော်တို့ကိုကျော်တို့သည်ကြီးစွာသောဘေးဥပဒ်ကိုဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့, ထိုကဲ့သို့သောမတိုင်မီကောင်းကင်ဘုံ၏အားလုံးအောက်တွင်တည်ရှိဘယ်တော့မှအတိုင်း, ယေရုရှလင်မြို့၌ပြုသောအမှုထားပြီးအဘယ်အရာသည်နှင့်အညီ.
9:13 မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ထားပြီးသကဲ့သို့, ဤဒုစရိုက်အပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်သို့ရောက်လေပြီ, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏မကျြနှာကိုတောင်းပန်မပြုခဲ့, အိုထာဝရဘုရားကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ, ကျွန်တော်နောက်ကျောကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကနေဖွင့်နှင့်သင့်အမှန်တရားစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်.
9:14 ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်မကောင်းသောအစောင့်များနှင့်အကြှနျုပျတို့ကိုအုကြောင့်ဦးဆောင်ထားပါတယ်; ဘုရားသခင်, ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ, ရုံအပေါင်းတို့သည်သူ၏အကျင့်ကိုကျင့်၌တည်ရှိ၏, ပေးသောသူပြည့်စုံထားပါတယ်, ကျနော်တို့တော်အသံကိုနားမထောင်ပြီ.
9:15 နှင့်ယခု, အိုထာဝရဘုရား, ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ, သူတစ်ဦးအားကြီးသောလက်တော်နှင့်အဲဂုတ္တုပြည်မှကယ်သင်၏လူများကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးဤနေ့နှင့်အညီကိုယ့်ကိုယ်နာမည်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ: ကျွန်တော်ပြစ်မှားပါပြီ, ကျွန်တော်ပြစ်မှားပါပြီ.
9:16 အိုထာဝရဘုရား, အားလုံးသင့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ဘို့, လွှဲ, တောင်းပန်ပါတယ်, သင့်ရဲ့အမျက်ဒေါသနှင့်သင့်မြို့ကနေသင့်ရဲ့ဒေါသအမျက်, ယေရုရှလင်မြို့, နှင့်သင့်အဘို့သန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်ကနေ. အကြောင်းမူကား,, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့အပြစ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများ၏အပြစ်, ဂျေရုဆလင်နှင့်သင့်လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဝန်းရံသောသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုဖြစ်ကြသည်.
9:17 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, သတိ, အိုဘုရားသခင်, ကိုယ်တော်၏ကျွန်နှင့်သူ၏တောင်းဆိုမှု၏ပဌနာ, နှင့်သင့်သန့်ရှင်းရာဌာနကိုကျော်သင်၏မျက်နှာကိုထုတ်ဖေါ်, လူဆိတ်ညံလျက်ဖြစ်သော, သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘို့အလိုငှါ.
9:18 နူးညွတ်သောနား, အိုအကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျ, ကြား, သင်၏မျက်စိဖွင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူဆိတ်ညံရာနှင့်သင်တို့၏နာမမဖြစ်၏သောကျော်မြို့တော်ကိုတွေ့မြင်. ထိုသို့ငါတို့သည်သင်တို့၏ရှေ့၌တောင်းဆိုမှုများကိုပူဇော်သောငါတို့မျှတမှုမှတဆင့်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့သနားစုံမက်၏ပြည့်စုံခြင်းမှတဆင့်.
9:19 သတိ, အိုထာဝရဘုရား. ကျေနပ် Be, အိုထာဝရဘုရား. Turn နှင့်လုပ်ရပ်. နှောင့်နှေးမနေပါနဲ့, သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘို့အလိုငှါ, အိုအကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျ, သင်တို့၏နာမကိုသင်၏မြို့အပေါ်မှာနှင့်သင့်လူမျိုးကိုစိုးမဖြစ်၏ကြောင့်။ "
9:20 ထိုအခါငါနေဆဲစကားပြောဆုတောင်းနှင့်ငါ၏အပြစ်များကိုဘျောပွနေစဉ်, ငါ၏လူတို့၏အပွစျမြား, ဣသရ, အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျ၏ရှေ့တော်၌ငါ့ပဌနာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျ၏သန့်ရှင်းသောတောင်ကိုယ်စား,
9:21 ငါနေဆဲဆုတောင်းခြင်းဖြင့်စကားပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဖြစ်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, ထိုလူဂါဗြေလ, ကျွန်မအစအဦးမှာဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုမြင်ကြသောကြောင့်အဘယ်သူကို, အလျင်အမြန်ပျံ, ညနေပိုင်းတွင်ယဇျပူဇျော၏ထိုအချိန်ကငါ့ကိုထိခိုက်.
9:22 ထိုမင်းသည်ငါ့အားသွန်သင်, သူငါ့ကိုအားမိန့်ဆိုသည်, "အခုဆိုရင်, ဒံယလေက, ငါသည်သင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့နဲ့သငျသညျကိုနားလည်ကူညီရန်ထွက်လာကြပြီ.
9:23 သင့်ရဲ့ပဌနာရဲ့အစမှာ, မက်ဆေ့ခ်ျ ထွက်., သငျသညျရှာသောသူတစ်ဦးသည်လူဖြစ်သောသူမရှိသေးပါငါအမှနျကရှင်းပြဖို့လာကြပြီ. ထို့ကြောင့်, သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမှအနီးကပ်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုနားလည်ရမယ်.
9:24 နှစ်ပေါင်းခုနစ်ဆယ်ပတ်ကြာကိုယ်တော်၏လူပေါ်နှင့်သင့်သန့်ရှင်းသောမြို့တော်အာရုံစိုက်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်လွန်ကျူးလက်စသတ်ရကြလိမ့်မည်, နှင့်အပြစ်တစ်ခုအဆုံးကိုရောက်ရှိကြမည်, အပြစ်ကိုပယ်ရှားသုတ်ခံရကြလိမ့်မည်, ဒါထာဝရတရားမျှတမှုကိုယူဆောင်လိမ့်မည်, နှင့်ရူပါရုံကိုနှင့်အနာဂတ္တိမပြည့်စုံရကြလိမ့်မည်, နှင့်သန့်ရှင်းသူတို့၏စိန့်ဘိသိက်ခံရကြလိမ့်မည်.
9:25 ထို့ကြောင့်, သတိကိုသိနှင့်ယူ: ယင်းနောက်တဖန်ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်စကားလုံးများ၏ထွက်ရာမှ, ခရစျတျောခေါင်းဆောင်သည်အထိ, နှစ်ပေါင်းခုနစ်ခုရက်သတ္တပတ်ရှိလိမ့်မည်, နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်-နှစ်ပတ်အတွင်း; နှင့်ကျယ်ပြန့်လမ်းကြောင်းကိုနောက်တဖန် built ပါလိမ့်မည်, နှင့်နံရံများ, ဒုက္ခဆင်းရဲကိုတစ်ဦးအချိန်အတွက်.
9:26 နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်-နှစ်ပတ်အတွင်းအပြီး, ခရစျတျောခေါင်းဆောင်ကွပ်မျက်လိမ့်မည်. သူ့ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ကြသောလူသည်သူ၏လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. လူများတို့သည်, သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရောက်ရှိသည့်အခါ, မြို့နှင့်သန့်ရှင်းရာဌာနဖျက်ဆီးမည်. နှင့်၎င်း၏အဆုံးပျက်စီးမှုများဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့်, စစ်ပွဲ၏အဆုံးအပြီး, ပျက်စီးခြင်းကို set up ပါလိမ့်မည်.
9:27 ဒါပေမယ့်သူကအနှစ်များထဲမှတစ်ပတ်အများအပြားနှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့အတည်ပြုပါလိမ့်မယ်; နှစ်ပေါင်းတစ်ပတ်နှင့်အဘို့အဝက်, သားကောင်ယဇျပူဇျောနီးပါးငြိမ်းလိမ့်မည်; ဒါပေမယ့်ဗိမာန်တော်၌လူဆိတ်ညံရာ၏ရွံ့ရှာဘွယ်အရှိလိမ့်မည်. ထိုအခါလူဆိတ်ညံလျက်ပင်ကုနှင့်အဆုံးကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "
10:1 ကုရု၏တတိယနှစ်တွင်, ရှရှင်ဘုရင်, သတင်းစကားတစ်ခုဒံယေလကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်, Belteshazzar ကိုခေါ်, နှင့်စစ်မှန်သောစကားလုံး, တို့နှင့်ကြီးသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ. သူသည်ထိုအမက်ဆေ့ခ်ျကိုနားလည်သဘောပေါက်, နားလည်မှုအဘို့အရူပါရုံလိုအပ်.
10:2 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, ငါ, ဒံယလေက, ရက်ပေါင်းသုံးပတ်ကြာငိုကြွေးမြည်တမ်း.
10:3 ငါမနှစ်လိုဖွယ်သောမုန့်ကိုစားကြ၏, မအသား, မဟုတ်စပျစ်ရည်ကို, ငါ့နှုတ်ကိုဝင်ကြ၏, ငါဆီမွှေးနှင့်အတူဘိသိက်ခံခဲ့သည်မဟုတ်, ကာလ၏သုံးပတ်ပြီးစီးမှီတိုင်အောင်.
10:4 သို့သော်ပဌမလနှစ်ဆယ်လေးနေ့၌, ငါကြီးမြတ်မြစ်ဘေးတွင်ခဲ့သည်, တိုက်ဂရစ်မြစ်အရာဖြစ်ပါသည်.
10:5 ထိုအကျွန်ုပ်၏မျက်စိချီ, နှင့်ငါမြင်, အကယ်စင်စစ်, တယောက်သောသူပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်,, နှင့်သူ၏ခါးအကောင်းဆုံးသောရွှေနှင့်ပတ်ရစ်ခဲ့သည်,
10:6 နှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ရွှေကျောက်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်, နှင့်သူ၏မကျြနှာကိုလျှပ်စီး၏အသွင်အပြင်ခဲ့, တစ်ဦးမီးလောင်ရာဆီမီးနှင့်သူ၏မျက်စိကြောင်း, နှင့်သူ၏လက်နက်အပေါင်းတို့နှင့်ကြောင့်အောက်ဖက်ခြေဖို့အားလုံးကိုနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်မီးကြေးဝါကဲ့သို့၎င်း၏အသွင်အပြင်ခဲ့, နှင့်သူ၏စကားပြောအသံအလုံးအရင်း၏စကားသံကဲ့သို့ဖြစ်၏.
10:7 သို့သော်လည်းငါသည်, ဒံယလေက, တစ်ဦးတည်းရူပါရုံကိုမြင်, ကြှနျုပျနှငျ့ပါသောသူတို့သညျကမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးများအတွက်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုအလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအသူတို့အပေါ်မှာတဟုန်တည်းပြေး, သူတို့ပုန်းခိုသို့ပြေး.
10:8 ထိုအခါငါ, တယောက်တည်းကျန်ရစ်သောခံတော်မူပြီးမှ, ဤကွီးစှာသောဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုမြင်, ငါ့ကိုခွန်အားမရှိကျန်ရစ်, ထိုမှတပါး, ငါ၏အအသွင်အပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်, ငါ languished, မည်သည့်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိခြင်းမဟုတ်.
10:9 ငါသည်သူ၏စကားသံကိုကြား, ငါကြားရသောအခါ, ငါသည်ငါ့မျက်နှာပေါ်မှာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများအတွက်အိပ်, ငါ့မျက်နှာကိုမြေပြင်နှင့်နီးစပ်သောခဲ့သည်.
10:10 ထိုအခါ, လက်ငါ့ကိုထိခိုက်, နှင့်အကြှနျုပျဒူးနှင့်ငါ့လက်၏လက်ပေါ်သို့ငါ့ကိုကြီးပြင်း.
10:11 ထိုမင်းသည်ငါ့အားပြောဆို၏, "ဒံယလေ, တောင့်ဖြင့်လူ, ငါသည်သင်တို့အားဟောပြောသောစကားတို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်, ဖြောင့်မတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတ်တပ်ရပ်, ယခုတွင်ငါသည်။ သငျသညျကိုစလှေတျပါ၏အတွက် "ပြီးတော့သူကငါ့ကိုမှသည်ဤစကားဆိုပါတယ်ပြီးမှ, ကျွန်မတုန်လှုပ်မတ်တပ်ရပ်.
10:12 ထိုမင်းသည်ငါ့အားပြောဆို၏, "မကြောက်ပါနဲ့, ဒံယလေက, သငျသညျကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သင်၏နှလုံးသတ်မှတ်ထားသောပထမဦးဆုံးသောနေ့ ရက်မှစ. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, သင်၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကိုယ့်ကိုယ်ဉျးဆဲခွငျးအားဖွငျ့, သင်၏စကားလိုက်နာခဲ့ကြ, ငါရှိသောကြောင့်သင်၏စကားများရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ.
10:13 ဒါပေမဲ့ရှ၏နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ဆယ်တရက်ပတ်လုံးငါ့ကိုဆီးတား, အကယ်စင်စစ်, မိုက်ကယ်, မူလတန်းခေါငျးဆောငျမြား၏တဦးတည်း, ငါ့ကိုကူညီဆီသို့ရောက် လာ. ,, ငါအဲဒီမှာရှရှင်ဘုရင်၏အဖို့လာမယ့်ကျန်ရစ်.
10:14 သို့သော်လည်းငါသည်နောင်ကာလ၌သင်၏လူများထံသို့အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးလာကြပြီ, ထိုရူပါရုံယခု မှစ. ကာလကြာမြင့်စွာအဘို့ဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား, "
10:15 ထိုမင်းသည်ဤနည်း၌ငါ့ကိုမှစကားများစကားပြောနေစဉ်, ငါမြေပေါ်မှာငါ့မျက်နှာကိုနှိမ့်ချခြင်းနှင့်အသံတိတ်ခဲ့.
10:16 ထိုအခါ, လူသား၏သဏ္ဍာန်တစ်ခုခုကိုငါ့နှုတ်ခမ်းထိမိ. ထိုအခါ, ငါ့နှုတ်ကိုဖွင့်လှစ်, ငါ့ရှေ့မှာရပ်နေသောသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ဟု, "ငါ့အရှင်, သငျသညျတို့ရှေ့မှာမှာ, ငါ၏အခြေလက်အင်္ဂါအားနည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နှင့်မျှမတို့အစွမ်းသတ္တိကိုငါ၌ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်.
10:17 ဆိုတော့, ဘယ်လိုအကြှနျုပျ၏သခငျ၏ကျွန်သည်အရှင်နှင့်အတူစကားပွောနိုငျ? အဘယ်သူမျှမခှနျအားငါ့ကိုဖြစ်နေဆဲ; ပင်ငါ၏အအသက်ရှူနှောင့်နှေးနေပါတယ်။ "
10:18 ထို့ကြောင့်, လူယောက်ျားကဲ့သို့ကြည့်ရှုတော်မူသောသူ, နောက်တဖန်ငါ့ကိုငါ့ကိုခိုင်ခံ့စေ၏.
10:19 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "ကိုကွောကျရှံ့မဟုတ်, တော၏အချင်းလူ. ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်နှင့်အတူရှိပါစေ. သူကငါ့ကိုမှပြောသောအခါရဲစွမ်းသတ္တိကိုယူနှင့်ခိုင်ခံ့သောရှိစေသတည်း။ "ထိုအခါ, ငါပြန်လည်ကောင်းမွန်, ငါကဆိုပါတယ်, "Speak, ငါ့သခင်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုခိုင်ခံ့စေ၏ပြီ။ "
10:20 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, ငါသည်သင်တို့ထံသို့လာကြပါပြီအဘယ်ကြောင့် "သင်မသိကြ? နောက်ငါပြန်ဦးမည်, ပါရှန်း၏ခေါင်းဆောင်တိုက်. ငါထွက်ခွာသောအခါ, ရောက်ရှိလာဟေလသလူများ၏ခေါင်းဆောင်ရှိသည်ထင်ရှား.
10:21 ဒါပေမယ့်, အမှန်တရားအတွက်, ငါအမှနျတရား၏အညီကျမ်းစာလာသည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ကိုသင်သည်အဘယ်သို့မှကြေညာ. အဘယ်သူမျှမဤအရာအလုံးစုံ၌ငါ့အထောက်အဖြစ်ပါသည်, သင့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မိုက်ကယ် မှလွဲ. ။ "
11:1 "ဆိုတော့, ဒါရိမင်းကြီးပထမနှစ်တွင်မှအမေဒိ, ငါမြဲမြံစွာရပ်နေကြ၏, သူကအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့စေ၏စေခြင်းငှါဒါ.
11:2 ယခုမှာသင်တို့ကိုငါအမှနျတရားကိုကြေညာပါလိမ့်မယ်. အကယ်, အချို့အချက်မှတက်, ရှင်ဘုရင်သုံးပါးတို့ကိုပါရှားရပ်ပါလိမ့်မယ်, စတုတ္ထအလွန်အားထိုသူအပေါင်းတို့အထက်တွင်တန်ခိုး၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံပါလိမ့်မည်. မိမိအရင်းမြစ်များအားဖြင့်ခိုင်ခံ့လာခဲ့သည်သည့်အခါ, သူကဂရိနိုင်ငံ၏နိုငျငံတျောဆန့်ကျင်အားလုံးကိုနှိုးဆော်ကြလိမ့်မည်.
11:3 သို့သော်တစ်ဦးအားကြီးသောရှင်ဘုရင်တယောက်ထမညျ, သူမဟာတန်ခိုးနဲ့အတူအုပ်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်, သူနှစ်သက်တဲ့ဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်.
11:4 ထိုမင်းသည်မြဲမြံစွာတည်ထားပြီးသည့်အခါ, သူ၏နိုင်ငံသည်ချိုးဖဲ့မည်ဖြစ်ပြီးကောင်းကင်လေးမျက်နှာတို့၌ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်မရသူ၏အနှယျမှ, မဟုတ်ကသူ၏တန်ခိုးတော်အတိုင်းသူအုပ်ချုပ်သော. သူ၏နိုင်ငံကိုအပိုင်းပိုင်းကိုက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်, ပင်ဤအရာမှနှင်ထုတ်ခဲ့ကြသူအပြင်ကလူများအတွက်.
11:5 တောင်ပိုင်းနှင့်ရှင်ဘုရင်၏အအားဖြည့်ပါလိမ့်မည်, သေးကသူ၏ခေါငျးဆောငျမြား၏တဦးတည်းကသူ့ကိုကျော်မနိုင်ပါလိမ့်မယ်, သူစည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့အတူအုပ်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်, ကြီးမြတ်သည်မိမိဒိုမိန်းဖြစ်ပါသည်.
11:6 ထိုအနှစ်အများ၏အဆုံးအပြီး, သူတို့တစ်တွေအသင်းချုပ်ဖွဲ့စည်းစေမည်, နှင့်တောင်ရှင်ဘုရင်၏သမီးချစ်ကြည်ရေးစေရန်မြောက်ရှင်ဘုရင်ထံသို့ရောက်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သူမလက်မောင်းများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုရရှိရန်မည်မဟုတ်, မသူမ၏အမျိုးအနွယ်ကိုအခိုငျအမာရပ်တည်ပါလိမ့်မယ်, သူမလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပါလိမ့်မည်, သူမ၏နှုတ်ဆောင်ခဲ့သောသူတို့နှင့်အတူတလျှောက်, မြို့သားလုလင်တို့ကို, ထိုအကာလ၌သူမ၏နှစ်သိမ့်သောသူနှင့်ထို.
11:7 နှင့်သူမ၏အမြစ်များများ၏အပင်ပေါက်ရန်အတွက်ကနေအစားထိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, သူတစ်ဦးစစ်တပ်နဲ့အတူပါလာလိမ့်မယ်, နှင့်မြောက်ရှင်ဘုရင်၏ပြည်နယ်ထဲသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်, သူကသူတို့ကိုအလွဲသုံးစားပါလိမ့်မယ်, နှင့်အစာရှောင်ခြင်းကြောင့်ကိုင်ထားလိမ့်မယ်.
11:8 နှင့်, ဖြည့်စွက်ကာ, သူကအီဂျစ်ပြည်သို့မိမိတို့ဘုရားသွားခြင်းကိုဆောင်ရွက်မည်, နှင့်သူတို့၏ရုပ်တုဆင်းတု, ရွှေငွေနှင့်ထိုနည်းတူသူတို့၏အဖိုးတန်ရေယာဉ်များ. သူကမြောက်ရှင်ဘုရင်သည်ဆန့်ကျင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်.
11:9 တောင်ပိုင်းနှင့်ရှင်ဘုရင်၏အနိုငျငံတျောသို့ဝကြလိမ့်မည်, မိမိပြည်သို့ပြန်သွားကြလိမ့်မည်.
11:10 သို့သော်သူ၏သားတို့စိန်ခေါ်ပါလိမ့်မည်, သူတို့အလွန်များစွာသောတပ်ဖွဲ့များများစွာသောလူစုဝေးကြလိမ့်မည်. ထိုမင်းသည်အပြေးအလွှားနဲ့လျှံရောက်လာပါလိမ့်မယ်. ထိုမင်းသည်နောက်သို့လှည့်ပါလိမ့်မည်, သူသည်စိတ်ပူပန်ပါလိမ့်မည်, မိမိနီခြင်းအတွက်စစ်တိုက်ရာတွင်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်.
11:11 တောင်ပိုင်းနှင့်ရှင်ဘုရင်၏အ, ရှိခြင်းစိန်ခေါ်ခံနေရ, ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်နှင့်မြောက်ရှင်ဘုရင်သည်စစ်တိုက်မည်, သူတစ်ဦးသည်အလွန်ကြီးစွာသောအလုံးအရင်းလုပ်မည်, ပြီးလူအစုအဝေး၌မိမိလက်သို့ငါအပ်လိမ့်မည်.
11:12 သူအလုံးအရင်းသိမ်းယူလိမ့်မယ်, နှင့်သူ၏နှလုံးချီးမြှောက်မည်, သူအများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာလှဲချမည်, ဒါပေမဲ့သူမနိုင်ပါလိမ့်မယ်.
11:13 မြောက်ကိုရီးယား၏ရှင်ဘုရင်အဘို့မဟာဗျူဟာကိုပြောင်းပါလိမ့်မယ်, အရင်ထက်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်တဲ့လူအစုအဝေးလုပ်မည်, နှင့်ကြိမ်နှစ်ရဲ့အဆုံးမှာ, သူကြီးစွာသောအလုံးအရင်းနှင့်အလွန်အရင်းအမြစ်များကိုနှင့်အတူရှေ့ဆက်အလျင်စလိုပါလိမ့်မယ်.
11:14 ထိုကာလ၌, များစွာသောတောင်ရှင်ဘုရင်၏အတဘက်၌ထလိမ့်မယ်. ထိုနည်းတူကိုယ်တော်၏လူတို့တွင်လှည့်စား၏သားသူတို့ကိုယ်သူတို့ခြီးမွှောပါလိမ့်မယ်, ထိုရူပါရုံဖြည့်ဆည်းဖို့သကဲ့သို့, သူတို့ပြိုကျပါလိမ့်မယ်.
11:15 ထိုအခါမြောက်ရှင်ဘုရင်၏အရောက်လာမည်ဝိုင်းထားခြင်းအမှုတော်တို့ကိုသယ်ပို့ပေးမည်, သူအများဆုံးခိုင်ခံ့သောမြို့များသိမ်းယူလိမ့်မယ်. တောင်ပိုင်းနှင့်များ၏လက်နက်ဆီးတားနိုင်မည်မဟုတ်, နှင့်သူ၏ရွေးကောက်ခုခံတွန်းလှန်ရန်ထမညျ, ဒါပေမယ့်ခွန်အားမ.
11:16 ထိုမင်းသည်ရောက်ရှိသည့်အခါ, သူနှစ်သက်မယ့်အဖြစ်ကိုပြုလိမ့်မည်, နှင့်သူ၏မကျြနှာကိုဆန့်ကျင်ရပ်နေသောသူတယောက်မျှမရှိဖြစ်လိမ့်မည်. သူသည်ထိုအ Illustrious ပွညျ၌ရပ်နေမည်, ထိုသို့မိမိလက်အားဖြင့်စားသုံးကြလိမ့်မည်.
11:17 မိမိတစျခုလုံးကိုနိုငျငံတျောသညျကိုင်ဖို့ကွိုးစားအားမိမိမျက်နှာထားမည်, သူသူနှင့်အတူမျှတသောအခြေအနေများစေမည်. ထိုမင်းသည်မိန်းမတကာတို့ထက်သူ့ကိုသမီးကိုငါပေးမည်, ကဖြုတ်ချဖို့သကဲ့သို့. သို့သော်သူမမတ်တပ်ရပ်မည်မဟုတ်, မသူမကိုသူ့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်.
11:18 သူသည်ထိုအကျွန်းများဆီသို့မျက်နှာလှည့လိမ့်မယ်, သူအများအပြားသိမ်းယူလိမ့်မယ်. မိမိခံရသောကဲ့ရဲ့ခွငျး၏ခေါင်းဆောင်ငြိမ်းစေမည်, နှင့်သူ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုသူ့အဘို့လှည်ပါလိမ့်မည်.
11:19 ထိုမင်းသည်မိမိပြည်၏အင်ပါယာအားမိမိမကျြနှာကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်, သူဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်, ဖျက်ဆီးခြင်းပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကအောင်မြင်ဖို့မည်မဟုတ်.
11:20 အများစုအချည်းနှီးနဲ့ဘုရငျ့ဂုဏ်အသရေ၏မထိုက်တန်သူသည်မိမိနေရာမှတစျခုရှိတက်မတ်တပ်ရပ်ဦးမည်. ထိုအတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက်, သူထွက်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်မရဒေါသအရှိန်, စစ်မတိုက်.
11:21 နှင့်သူ၏အရပ်ဌာန၌စက်ဆုပ်ရွံတဦးတည်းရှိတက်မတ်တပ်ရပ်ဦးမည်, သူရှငျဘုရငျ၏ဂုဏ်အသရေတာဝန်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ. ထိုမင်းသည်တိတ်ဆိတ်စွာရောက်လာပါလိမ့်မယ်, သူလှညျ့စားခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတော်သို့ရယူဦးမည်.
11:22 ထိုအခါတိုက်ပွဲများ၏လက်ရုံးသူ၏မျက်နှာကိုမတိုင်မီစော်ကားမည်ဖြစ်ပြီးချိုးဖဲ့လိမ့်မည်, နှင့်, ဖြည့်စွက်ကာ, အဆိုပါအဖွဲ့ချုပ်၏ခေါင်းဆောင်.
11:23 နှင့်, မိတ်ဆွေများကိုအောင်ပြီးနောက်, သူကသူ့ကိုလှည့်စားပါလိမ့်မယ်, သူဖွင့်သွားလိမ့်မည်ကာသေးငယ်တဲ့လူတို့နှင့်အတူကျော်လွှားပါလိမ့်မယ်.
11:24 ထိုမင်းသည်ကြွယ်ဝသောနှင့်အရင်းအမြစ်များမြို့များအထဲသို့ ဝင်. ပါလိမ့်မယ်, မိမိဘိုးဘေးတို့ကိုပြု၏ဘယ်တော့မှဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်, မဟုတ်သလိုသူ့ဘိုးဘေး '' ဘိုးဘေးတို့သ. သူကသူတို့ဥစ္စာအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေပါလိမ့်မယ်, နှင့်၎င်းတို့၏လုယူရာဥစ္စာ, နှင့်သူတို့၏စည်းစိမ်သည်, နှင့်အများဆုံးတည်ကြည်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖွဲ့စည်းစေမည်, နှင့်ဤအချိန်သည်အထိ.
11:25 နှင့်သူ၏ခွန်အားနှင့်သူ၏နှလုံးကြီးစွာသောအလုံးအရင်းနှင့်တကွတောင်ရှင်ဘုရင်၏ဆန့်ကျင်သည်စိတ်ပူပန်ပါလိမ့်မည်. တောင်ပိုင်းနှင့်ရှင်ဘုရင်၏အများစွာကိုမဟာမိတ်များနှင့်အလွန်အားကောင်းသောအခွအေနရှိခြင်းအားဖြင့်စစ်မယ့်သို့တော်ကိုနှိုးဆော်ကြလိမ့်မည်, သို့သော်လည်းထိုအရပ်မည်မဟုတ်, သူတို့ကသူ့ကိုဆန့်ကျင်အစီအစဉ်များကိုဖွဲ့စည်းရန်ပါလိမ့်မယ်များအတွက်.
11:26 သူနှင့်အတူမုန့်ကိုစားသောသူတို့၌သူ့ကိုနှိပ်စက်တော်မူမည်, နှင့်မိမိတပ်နှိမ်နင်းလိမ့်မည်, အလွန်များစွာသောသေဆုံးပါလိမ့်မယ်, ကွပ်မျက်ခံရခံတော်မူပြီးမှ.
11:27 နှစ်ယောက်ရှင်ဘုရင်နှလုံးဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်, အန္တရာယ်လုပ်ဖို့, သူတို့တဦးတည်းစားပွဲ၌မုသာစကားကိုပြောပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအောင်မြင်မည်မဟုတ်, အဖြစ်သေးအဆုံးအခြားအချိန်အဘို့ဖြစ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
11:28 ထိုမင်းသည်များစွာသောအရင်းမြစ်များနှင့်အတူမိမိအပြည်သို့ပြန်သွားကြလိမ့်မည်. နှင့်သူ၏နှလုံးသည်သန့်ရှင်းသောပဋိညာဉ်ဆန့်ကျင်ပါလိမ့်မည်, သူပြုမူပါလိမ့်မယ်, မိမိပြည်သို့ပြန်သွားကြလိမ့်မည်.
11:29 ချိန်းချက်သောအချိန်မှာ, သူပြန်လာလိမ့်မယ်, သူတောင်အနီးသို့ချဉ်းကပ်မည်, ဒါပေမယ့်အဆုံးစွန်သောအချိန်ယခင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်.
11:30 ထိုအခါဂရိစစ်သင်္ဘောများနှင့်ရောမသူ့အပေါ်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်, သူထိုးဖောကျပါလိမ့်မည်, နှင့်ဆုတ်ခွာလိမ့်မယ်, နှင့်သန့်ရှင်းသောပဋိညာဉ်ဆန့်ကျင်ကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မည်, သူပြုမူပါလိမ့်မယ်. ထိုမင်းသည်ပြန်လာကြလိမ့်မည်နှင့်၎င်းတို့၏ရန်သူနှင့်တိုင်ပင်ဦးမည်, သန့်ရှင်းရာဌာန၏ပဋိညာဉ်တရားကိုစွန့်ပစ်ကြသူ.
11:31 ထိုမင်းနောက်မှစစ်လက်နက်မိမိအခြမ်းယူပါလိမ့်မယ်, သူတို့အစွမ်းသတ္တိ၏သန့်ရှင်းရာဌာနညစ်ညူးစေကြလိမ့်မည်, သူတို့သည်အစဉ်အမြဲပြုသောဝတ်ကိုပယ်လိမ့်မည်ဟုနှင့်ပျက်စီး၏စက်ဆုပ်ရွံရှာတော်မူ၏အတူကအစားထိုးဖို့ပါလိမ့်မယ်.
11:32 ထိုအခါသေတမ်းစာအတွင်းမတရားသောသူတို့အတွက်ပရိယာယ်ကိုတုပဖို့ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လူတွေ, သူတို့၏ဘုရားသခင် သိ., စှဲမွဲမည်ပြုမူပါလိမ့်မယ်.
11:33 ထိုအခါလူတို့တွင်ဆရာအများအပြားသွန်သင်မည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ထားဘေးဖြင့်ဆုံးပျက်စီးကြလိမ့်မည်, မီးဖြင့်, နှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအားဖြင့်, နှင့်နေ့ရက်များစွာအဘို့အစော်ကားမှုအားဖြင့်.
11:34 ထိုသူတို့ကလဲသေကြပြီအခါ,, သူတို့တစ်တွေနည်းနည်းအကူအညီဖြင့်ထောက်ခံလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်အများကြီးပရိယာယ်သူတို့ကိုလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်.
11:35 ထိုအခါသင်ယူအချို့ပျက်စီးလိမ့်မည်, သူတို့ထွက်လေနှင့်ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့်စင်ကြယ်စေခြင်းငှါ, အဆိုပါကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အထိ, နေဆဲအခြားအချိန်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်.
11:36 ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်သူ၏အလိုတော်အတိုင်းပြုမူလိမ့်မယ်, သူချီမည်ဖြစ်ပြီးရှိသမျှဘုရားဆန့်ကျင် extolled ပါလိမ့်မည်. ထိုမင်းသည်ဘုရားတို့၏ဆန့်ကျင်ကြီးသောအမှုတို့ကိုပြောမည်, သူကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်, အဆိုပါစိတ်အားထက်သန်မှုပြီးစီးသည်အထိ. ပြီးတာနဲ့ပြည့်စုံ, ကန့်သတ်သည်ဧကန်အမှန်ဖြစ်နှင့်အတူရောက်ရှိ.
11:37 မိမိဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ရန်မစဉ်းစားပေးတော်မူမည်, သူအမြိုးသမီးမြား၏အလိုဆန္ဒအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်, သူမဆိုဘုရားအားတက်ရောက်ရန်မည်မဟုတ်, သူကခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတဘက်၌ထလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
11:38 သို့သော်သူသည်မိမိအရာဌာန၌ဘုရား Maozim ကိုးကွယ်ပွုပါမညျ, နှင့်, သူ့ဘိုးဘေးမသိခဲ့ပါဘယ်သူကိုဘုရား, သူကရွှေနှင့်ဝတ်ပြုရလိမ့်မည်, နှင့်ငွေ, ကျောက်မြတ်, နှင့်အဘိုးထိုက်သောအမှုအရာ.
11:39 ထိုမင်းသည်တကျွန်းတနိုင်ငံသားဘုရားနှင့်အတူ Maozim အားဖြည့်ရန်ပြုမူပါလိမ့်မယ်, သူသတိထားမိဖြစ်လာသည်ဘယ်သူကို၏, သူကသူတို့ရဲ့ဘုန်းအသရေတိုးပွားစေလိမ့်မယ်, နှင့်လူများတို့အပေါ်မှာခွင့်ပေးမည်, သူအခမဲ့မြေယာဖြန့်ဝေပါလိမ့်မယ်.
11:40 နှင့်, အဆိုပါကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်, တောင်ရှင်ဘုရင်သည်ထိုမင်းကိုတိုက်မည်, နှင့်မြောက်ရှင်ဘုရင်သည်မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းကဲ့သို့သူ့ကိုဆန့်ကျင်လာကြလိမ့်မည်, ရထားများနှင့်အတူ, နှင့်မြင်းစီးသူရဲနှင့်အတူ, ကြီးစွာသောရေတပ်နှင့်အတူ, သူသည်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်သို့ဝငျပါမညျ, နှင့်နှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ်.
11:41 သူသည်ထိုအဘုနျးကွီးသောပြည်သို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်, အများအပြားဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မယ်. သို့သော်သာသည်ဤသည်သူ၏လက်မှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဦးမည်: ဧဒုံပြည်သည်, မောဘ, အမ်မုနျအမြိုးသား၏ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျး.
11:42 ထိုမင်းသည်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်မှာမိမိလက်ကိုချမည်, အဲဂုတ္တုပြည်မှလွတ်မြောက်ရန်မည်မဟုတ်.
11:43 ထိုမင်းသည်ရွှေဘဏ္ဍာကိုကိုင်ဆောင်သောကိုအုပ်စိုးလိမ့်မယ်, နှင့်ငွေ, အဲဂုတ္တုလူအပေါင်းတို့သည်အဘိုးထိုက်သောအရာ, ထိုနည်းတူသူလစ်ဗျားနဲ့အီသီယိုးပီးဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ်.
11:44 နှင့်ကောလာဟလများကိုအရှေ့ကနေနှင့်မြောက်ကိုရီးယားလိမ့်မည်ဒုက္ခသူ့ထံမှ. ထိုမင်းသည်ဖျက်ဆီးဖို့နှင့်အများအပြား execute ရန်အလုံးအရင်းနှင့်တကွရောက်လာပါလိမ့်မယ်.
11:45 မိမိသည်တဲတော်စွဲစေပါလိမ့်မယ်, တဲ, ပင်လယ်ကြားမှာ, တစ်ဦး Illustrious နှင့်သန့်ရှင်းသောတောင်တို့အပေါ်မှာ, သူပင်၎င်း၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှလာကြလိမ့်မည်, အဘယ်သူမျှမစခြင်းငှါလိမ့်မည်။ "
12:1 "ဒါပေမဲ့အဲဒီအချိန်ကမိုက်ကယ်ကထမည်, ကြီးစွာသောခေါင်းဆောင်, အဘယ်သူသည်ကိုယ်တော်၏လူများ၏၏သားတို့အဘို့ဖွင့်ရပ်တည်. ထိုအခါအချိန်ရောက်လိမ့်မည်, ထိုကဲ့သို့သောတပါးအမျိုးသားတို့စတင်ခဲ့ကြောင်းအချိန်ကနေမဖြစ်ခဲ့ပြီအဖြစ်, ပင်ထိုအခြိနျတိုငျအောငျ. နှင့်, ထိုအချိန်မှာ, သင်၏လူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်, ကျမ်းစာ၌လာသည်တွေ့ရှိရလိမ့်မည်သူအားလုံးကို.
12:2 ထိုအခါမြေမှုန့်၌အိပ်ပျော်သောသူများတို့သည်နိုးကြလိမ့်မည်များစွာကို: ထာဝရအသက်ကိုအချို့, သူတို့ကအမြဲကြည့်ရှုမည်ကိုကဲ့ရဲ့ဖို့တခြားသူတွေ.
12:3 သို့သော်သွန်သင်ကြပြီတဲ့သူတွေကြက်၏အရောင်အဝါကဲ့သို့အထွန်းလင်းကိုလိမ့်မည်, နှင့်တရားမျှတမှုဆီသို့ဦးတည်အများအပြားတို့ကိုသွန်သင်သောသူတို့အား, အစဉ်အမြဲခံရသောထာများအတွက်ကြယ်ကဲ့သို့.
12:4 သင်တို့မူကား,, ဒံယလေက, မက်ဆေ့ခ်ျကိုပိတ်စာစောင်ကိုတံဆိပ်ခတ်ထား, ယင်းထူထောင်အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်. အတော်များများကဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ်, နှင့်အသိပညာတိုးပွားလာပါလိမ့်မည်။ "
12:5 ထိုအခါငါ, ဒံယလေက, ကြည့်ရှု, အကယ်စင်စစ်, အလားတူအခြားနှစ်ယောက်ထ, ဤနေရာတွင်ကျော်တဦးတည်း, မြစ်၏ကမ်းတွင်, အဲဒီမှာကျော်ကတခြား, မြစ်၏အခြားဘဏ်အပေါ်.
12:6 ထိုနောက်မှငါသည်လူကိုပြောဆို၏, ပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်, သူ, သူမြစ်ရေအပေါ်မှာတည်နေ၏, "ဘယ်လောက်ကြာဤအံ့ဘွယ်သောအမှု၏အဆုံးတိုင်အောင်အဖွစျလိမျ့မညျ?"
12:7 ထိုအခါငါယောက်ျားသည်ကိုကြား, ပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်, သူ, သူမြစ်ရေအပေါ်မှာတည်နေ၏, သူကကောင်းကင်သို့တက်သည်သူ၏လက်ျာလက်တော်နှင့်သူ၏လက်ဝဲလက်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးမှ, နှင့်အစဉ်အမြဲတည်နေသောသူသူတိုင်တည်လျက်ကျိန်ဆိုခဲ့သည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးသည်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့, နှင့်အချိန်များ, တဝက်အချိန်. ထိုအခါသန့်ရှင်းသောလူမျိုး၏လက်၏အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားပြီးစီးသောအခါ, ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီးလိမ့်မည်.
12:8 ထိုအခါငါကြားနားမလည်ခဲ့ဘူး. ထိုအခါငါကပြောသည်, "ငါ့အရှင်, ဤအရာတို့ကိုအပြီးအဘယ်အရာဖြစ်လိမ့်မည်?"
12:9 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "Go ကို, ဒံယလေက, အဆိုပါစကားကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်အပိတ်နဲ့တံဆိပ်ခတ်နေကြသည်များအတွက်.
12:10 အတော်များများကရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့်စင်ကြယ်စေကြလိမ့်မည်, နှင့်, မီးဖြင့်လျှင်အဖြစ်, သူတို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်, နှင့်မတရားသောသူတို့အတွက် impiously ပြုမူပါလိမ့်မယ်, နှင့်မတရားသောသူတို့အတွက်အဘယ်သူအားမျှနားလည်ကြလိမ့်မည်, သေးဆရာများနားလည်ပါလိမ့်မယ်.
12:11 ထိုအစဉ်အမြဲပြုသောဝတ်ကိုပယ်လိမ့်မည်နှင့်ပျက်စီး၏စက်ဆုပ်ရွံရှာတော်မူ၏ကို set up ပါလိမ့်မည်သည့်အခါအချိန်ကနေ, တထောင်နှစ်ရာကိုးဆယ်ရက်အတွင်းရှိလိမ့်မည်.
12:13 သင်တို့မူကား,, သွား, အဆိုပါကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်, သငျတို့သငြိမ်ဝပ်စွာနေပါလိမ့်မယ်ကာလအဆုံးမှာသင့်ရဲ့ချထားပေးရာဌာန၌ရပ်နေမည်.
13:1 ဗာဗုလုန်မြို့တွင်နေထိုင်သောလူတရှိခဲ့သည်, နှင့်သူ၏နာမကိုအမှီ Joakim ခဲ့သည်.
13:2 ထိုမင်းသည်ဆူဆန်နာအမည်ရှိသောမယားကိုလက်ခံရရှိ, ဟိလခိ၏သမီး, အလွန်လှပဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူသည်ခဲ့တယ်.
13:3 သူမ၏မိဘများအတွက်, သူတို့ဖြောင့်မတ်သောကြောင့်, မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းနှင့်အညီ၎င်းတို့၏သမီးပညာတတ်ခဲ့သည်.
13:4 သို့သော် Joakim အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့တယ်, မိမိအိမ်သူအိမ်သားအနီးမှာတစ်ခြံခဲ့, နှင့်ယုဒလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုကြပါတယ်, သူကသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့၏အရှိဆုံးဂုဏ်အသရေကြောင့်.
13:5 နှစ်ယောက်အကြီးအကဲတစ်ဦးတရားသူကြီးတွေအဲဒီနှစ်လူစုခနျ့အပျခဲ့, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူတော်မူသောအကြောင်းကို, "အဓမ္မဗာဗုလုန်မြို့ထဲကရောက်လာပြီ, အသက်ကြီးတရားသူကြီးတွေကနေ, သူကလူအုပ်ချုပ်ဖို့သလိုပဲ။ "
13:6 ဤရွေ့ကား Joakim ၏အိမ်တော်မကြာခဏ, လူအပေါင်းတို့သည်ထိုသူတို့ဆီသို့ရောက် လာ. ,, သူကိုတရားစီရင်ရာလိုအပ်ခဲ့.
13:7 သို့သော်လူအ noontime မှာထွက်သွားသောအခါ, ဆူဆန်နာစရပ်သို့ ဝင်. နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့ဥယျာဉ်ခြံများတွင်တဝိုက်လမ်းလျှောက်.
13:8 ထိုအကွီးအကဲမြားသူမ၏ဝင်ဝကိုမြင်နေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်, သူတို့သူမ၏ဆီသို့အလိုဆန္ဒနှင့်အတူရောင်ခဲ့ကြသည်.
13:9 ထိုသူတို့ကသူတို့၏အကြောင်းပြချက်လှဲနှင့်၎င်းတို့၏မျက်စိလွှဲ, သူတို့သညျကောငျးကငျမှမကြည့်မယ်လို့ဒါ, မဟုတ်မယ့်တရားစီရင်ပိုင်စိတ်ထဲခေါ်.
13:10 ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသူမ၏မတ်ေတာသဖြင့်ဒဏ်ရာရ, သေးသူတို့အချင်းချင်းမိမိတို့၏ဝမ်းနည်းခြင်းထုတ်ဖေါ်မပြုခဲ့.
13:11 သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ဖို့ရှက်သောကြောင့်, သူမ၏နှငျ့အတူအိပျခငျြ.
13:12 ဒီတော့သူတို့ကသူမကိုကြည့်ဖို့နေ့တိုင်းဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်. တဦးတယောက်တည်းကအခြားအားဆို၏,
13:13 "ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ကြစို့, ။ သူကနေ့လည်စာအချိန်ဖြစ်၏ "ထိုအခါမှထွက်မယ့်, သူတို့အခြားထံမှတဦးတည်းထွက်သွားကြ.
13:14 တဖန်ပြန်လာ, သူတို့ကနေရာတစ်ခုတည်းဆီသို့ရောက် လာ. ,, နှင့်, အသီးအသီးအခြားအကြောင်းပြချက်မေးခြင်း, သူတို့အလိုဆန္ဒဝန်ခံ. ပြီးတော့သူတို့ကတစ်ဦးတည်းသူမ၏ရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်အချိန်ကိုသတ်မှတ်ရန်သဘောတူ.
13:15 သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်ပျက်, သူတို့အနေနဲ့ခှငျ့နေ့အဘို့စောင့်ကြည့်နေချိန်တွင်, သူမတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အချိန်အနည်းဆုံးဝင်သော, ပဲမနေ့ကနဲ့ရှေ့တော်၌ထိုနေ့ကအဖြစ်, နှစ်ခုသာအိမ်ဖော်နှင့်အတူ, သူခြံများတွင်ဆေးကြောဖို့လိုခငျြ, ဒါကြောင့်အလွန်ပူသောကြောင့်,.
13:16 ထိုအရပ်၌အဘယ်သူမျှမရှိခဲ့သည်, ပုန်းခိုအတွက်နှစ်ခုအကွီးအကဲမြား မှလွဲ., သူတို့သူမ၏လေ့လာနေခဲ့ကြသည်.
13:17 ဒီတော့သူအိမ်ဖော်အားဆို၏, "ငါ့ကိုယူခဲ့ရေနံနှင့်ဆီ, နှင့်ဥယျာဉ်ခြံများတံခါးများကိုပိတ်ထား, ငါကိုလျှော်စေခြင်းငှါဤမျှ။ "
13:18 သူမကသူတို့ကိုအမိန့်အတိုင်းသူတို့ပြုကြ၏. ထိုသူတို့ခြံတံခါးတို့ကိုပိတ်သူမကမလိုအပ်သောအရာကိုဆွဲယူဖို့နောက်ကျောတံခါးကိုမှတဆင့် left, သူတို့အကွီးအကဲမြားအတွင်းပုန်းအောင်းခဲ့ကြကြောင်းမသိခဲ့ပါ.
13:19 သို့သော်အိမ်ဖော်ထွက်သွားကြပြီးမှ, နှစ်ခုအကွီးအကဲမြားသညျထနှင့်သူမ၏မှအလျင်အမြန်, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်,
13:20 "အကယ်, အဆိုပါဥယျာဉ်ခြံတံခါးတို့ကိုပိတ်ထားကြသည်, အဘယ်သူမျှမကိုအတွေ့နိုင်ပါသည်, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အလိုဆန္ဒ၌ရှိကြ၏. ထိုအမှုကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောတူခြင်းနှင့်ငါတို့နှင့်အတူအိပ်ရ.
13:21 သင်တို့မူကားမပါလျှင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးလုလင်ကိုသင်တို့နှင့်အတူအကြောင်းကိုသင်တို့တဘက်၌သက်သေခံမည်, ဒီအတွက်ကြောင့်, သငျသညျကွာသငျသညျမှသင်၏အိမ်ဖော်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ "
13:22 ဆူဆန်နာသက်ပြင်းချပြီးဟု, "ငါသည်အရပ်ရပ်တွင်ပိတ်သိမ်းငါ. ငါသည်ဤအမှုကိုပြုလျှင်, ဒါကြောင့်ငါ၌သေခြင်းပင်ဖြစ်သည်; သေးငါမပြုလျှင်, သင်၏လက်၌ငါလွတ်မြောက်ရန်မည်မဟုတ်.
13:23 ငါ့ကိုသင်တို့လက်သို့လွှဲမရှောင်သာလဲကျဖို့အတှကျဒါပေမယ့် သာ. ကောင်း၏, သခင်ဘုရား၏ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုဖို့ထက်။ "
13:24 ထိုအဆူဆန်နာကြီးသောအသံနှင့်ဟစ်, ဒါပေမယ့်အကွီးအကဲမြားကိုလညျးသူမ၏ဆန့်ကျင်အော်ဟစ်.
13:26 ဆိုတော့, အိမ်တော်ကျွန်ခြံအတွက်မြည်တမ်းသည်ကြားလျှင်, သူတို့ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့နောက်ကျောတံခါးကိုဖြင့်တဟုန်တည်းပြေး.
13:27 သို့သော်အသက်ကြီးစကားပြောခဲ့ပြီးနောက်, ကျွန်တို့အလွန်ရှက်, ဒီမျိုးဘာမှမရှိခဲ့ဘူးများအတွက်ဆူဆန်နာအကြောင်းကိုဆိုပါတယ်. ထိုသို့နက်ဖြန်နေ့၌ဖြစ်ပျက်,
13:28 လူအသူမခင်ပွန်း Joakim ရောက်လာသောအခါ, နှစ်ခုခန့်အပ်ထားသောအကွီးအကဲမြားကိုလညျးသို့ရောက်လာသော, ဆူဆန်နာဆန့်ကျင်မတရားသောသူတို့အစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝ, အသေသတ်ခြင်းကိုသူမ၏ထားနိုင်ရန်အတွက်.
13:29 ထိုသူတို့ကလူများရှေ့မှာကပြောပါတယ်, "ဆူဆန်နာများအတွက် Send, ဟိလခိ၏သမီး, သူတို့သူမ၏အဘို့ကိုစလှေတျခကျြခငျြး Joakim ၏ဇနီး။ "ထိုအ.
13:30 ထိုမိန်းမသည်သူမ၏မိဘများနှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့, နှင့်သား, လူအပေါင်းတို့သည်သူမ၏ဆွေမျိုးများ.
13:31 ထို့အပြင်, ဆူဆန်နာအဆင်းကိုအလွန်အားနူးညံ့သိမ်မွေ့သောလှပခဲ့သည်.
13:32 သို့သော်သူတို့အားမတရားသောသူတို့သူမ၏မျက်နှာအဝတ်မခြုံဘဲသင့်ကြောင်းအမိန့်တော်အတိုင်း, (သူမဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်များအတွက်,) ကအနည်းဆုံးသူတို့သူမ၏အလှအပနှင့်အတူကျေနပ်စေခြင်းငှါဒါ.
13:33 ထို့ကြောင့်, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်သူမ၏ငိုသိတယ်သူအပေါင်းတို့သည်.
13:34 သို့သော်လည်းနှစ်ဦးကိုခန့်အပ်ထားသောအကွီးအကဲမြား, လူအများ၏အလယ်၌ထ, သူမ၏ဦးခေါင်းကိုအပေါ်သို့မိမိတို့လက်ကိုမသတ်မှတ်.
13:35 ထိုမြို့၌ငိုကြွေးသံ, သူမကမိုဃ်းကောင်းကင်သို့တက်စိုက်ကြည့်, သူမ၏နှလုံးအတှကျသခင်ဘုရား၌ယုံကြည်ခြင်း.
13:36 ထိုအချိန်းချက်သောအကွီးအကဲမြားကပြောပါတယ်, "ကျနော်တို့တစ်ယောက်တည်းခြံအတွက်လမ်းလျှောက်စကားပြောစဉ်တွင်, ဒီတစ်ခုနှစ်ခုအိမ်ဖော်နှင့်အတူ လာ., သူခြံများ၏တံခါးများကိုပိတ်ထား, သူမဝေးသူမ၏အနေဖြင့်အိမ်ဖော်ကိုစေလွှတ်.
13:37 ထိုအခါလုလင်ကိုသူမ၏ဆီသို့ရောက် လာ. ,, ပုန်းခိုအတွက်သူကိုခဲ့သည်, သူသူနှင့်အတူအိပ်.
13:38 ထို့အပွငျ, ကျနော်တို့ကဥယျာဉ်ခြံတစ်ထောင့်ရှိကြ၏ကတည်းက, ဤဒုမြင်နေ, ငါတို့သည်သူတို့မှတက်သို့ပွေးလေ၏, ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအတူတကွ consorting ကိုမြင်လျှင်.
13:39 နှင့်, တကယ်ပါပဲ, ငါတို့သည်သူ့ကိုအမီလိုက်နိုင်ခဲ့ပါ, သူကကျွန်တော်တို့ကိုထက်တန်ခိုးကြီးသောကြောင့်, နှင့်တံခါးများဖွင့်လှစ်, သူကအထဲကခုန်.
13:40 ဒါပေမယ့်, ကြှနျုပျတို့သညျဤတစျဦးဖမ်းမိခဲ့ကတည်းက, ကျနော်တို့လုလင်သူကိုသိရန်တောင်းဆို, ဒါပေမယ့်သူမကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်ဆန္ဒဖြစ်ခဲ့သည်. ဤအမှုတွင်, ငါတို့သည်သက်သေခံဖြစ်ကြ၏။ "
13:41 လူအစုအဝေးသူတို့ကိုယုံကြည်သည်, သူတို့အကြီးအကဲများနှင့်လူများတရားသူကြီးခဲ့ကြသည်ရုံလျှင်အဖြစ်, သူတို့အသေခံရန်သူမ၏ပြစ်တင်ရှုတ်ချ.
13:42 သို့သော်ဆူဆန်နာကြီးသောအသံနှင့်ဟစ်ဟု, "ထာဝရဘုရားသခင့, အဘယ်သူသည်ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏ဘယ်အရာကိုသိတယ်, သူတို့ဖြစ်ပျက်မတိုင်မီအဘယ်သူသည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိတော်မူ၏,
13:43 သငျသညျသူတို့သညျငါ့ကိုတဘက်၌မမှန်သောသက်သေကိုဘွားမြင်သိရ, အကယ်စင်စစ်, ငါသေရမည်, ငါသည်ဤအမှုအရာတစုံတခုကိုမျှပွုပါပွီသော်လည်း, သောဤလူတို့သညျပွဲ၌ငါ့တဘက်၌တီထွင်ပြီ။ "
13:44 သို့သော်လည်းသခင်ဘုရားသူမ၏စကားကိုနား ထောင်..
13:45 ထိုမိန်းမသည်အသေသတ်ခြင်းကိုပယ်သွားဦးဆောင်သောအခါ, သခင်ဘုရားသည်လူငယ်တစ်ဦးယောက်ျားလေး၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉျတျောထမွောကျ, အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီဒံယလေသခဲ့.
13:46 ထိုမင်းသည်ကျယ်သောအသံနှင့်အော်ဟစ်, "ကျွန်မဒီတစ်ခု၏အသွေးသည်စင်ကြယ်ဖြစ်၏။ "
13:47 လူအပေါင်းတို့နှင့်, သူ့ကိုဆီသို့ပြန်လှည့်, ကပြောပါတယ်, "သင်သည်အဘယ်သို့ပြောနေကြပါသည်သောဤစကားလုံးဖြစ်ပါသည်?"
13:48 ဒါပေမယ့်သူ, သူတို့ထဲကအလယ်၌ရပ်လျက်နေစဉ်တွင်, ကပြောပါတယ်, "သင်တို့သည်ဤမျှလောက်ပညာမဲ့ကြ, ဣသရေလအမျိုး၏အမြိုးသားတို့, စီရငျမပါဘဲနှင့်အမှန်တရားကဘာလဲဆိုတာမသိဘဲ, သငျသညျဣသရလေ၏သမီးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြ?
13:49 တရားသဖြင့်စီရင်ပြန်သွား, သူတို့သူမ၏တဘက်၌မမှန်သောသက်သေကိုခံပြောပြီပြီ။ "
13:50 ထို့ကြောင့်, လူအလငျြအမွပြန်ရောက်, နှင့်အသက်ကြီးကလညျး, " လာ. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလယ်၌ထိုင်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသ, ဘုရားသခငျသညျသငျသညျအသက်ကြီး၏ဂုဏ်အသရေအားပေးတော်မူပြီကတည်းက။ "
13:51 ဒံယလေကလညျး, "အချင်းချင်းကနေအကွာအဝေးမှာထိုအရွေးချယ်ခွဲထား, ငါကသူတို့ကိုအကြားစစ်ကြောစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ "
13:52 ဆိုတော့, သူတို့ကွဲပြတ်လျက်ရှိ၏သည့်အခါ, အခြားအနေဖြင့်တဦးတည်း, သူကသူတို့ထဲကတယောက်ကိုခေါ်, သူကသူ့ကိုအားဆို၏, "သင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေရှေးခေတ်မကောင်းသောအ, ယခုသင်၏အပြစ်များကိုထုတ်လာကြပြီ, သငျသညျရှေ့တျော၌ကျူးလွန်သော,
13:53 မတရားတဲ့တရားစီရင်ပိုင်မှုကိုစီရင်, အပြစ်မဲ့နှိပ်စက်, နှင့်အပြစ်ရှိလွတ်မြောက် setting, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏သော်လည်း, '' ဒီအပြစ်မဲ့နှင့်ပဲသငျသညျအသသေတျကိုမထားရပေမည်။ ''
13:54 သို့ဖြစ်., သငျသညျသူ့ကိုမွငျလြှငျ,, သင်သည်ထိုသူတို့အတူတူစကားပွောမြင်သောသစ်ပင်အောက်၌ကြေညာ။ "သူကဆိုပါတယ်, "တစ်ဦးအမြဲစိမ်း mastic သစ်ပင်လက်အောက်တွင်။ "
13:55 သို့သော်ဒံယလေကဆိုပါတယ်, "အမှန်ဆိုသည်ကား,, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းကိုဆန့်ကျင်လိမ်ညာခဲ့ကြ. ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, ဘုရားသခငျ၏ကောငျးကငျတမနျ, သူ့ကိုအနေဖြင့်ဝါကျကိုလက်ခံရရှိဘဲလျက်, အလယ်မှာချသင်ကခွဲထွက်ပါလိမ့်မယ်.
13:56 နှင့်, သူ့ကိုဖယ်ထားပြီးလျှင်, သူကချဉ်းကပ်ဖို့ကတခြားမှာထားတော်မူ, သူကသူ့ကိုအားဆို၏, ခါနာန်အမျိုးသမီးတို့ကို "သင်အမျိုးအနွယ်, မဟုတျဘဲ, ယုဒ, အလှတရားသငျသညျလှည့်ဖြားထားပါတယ်, နှင့်အလိုဆန္ဒသည်သင်၏နှလုံးလှဲလိုက်ပါတယ်.
13:57 ထိုသို့သင်သည်ဣသရေလအမျိုး၏သမီးလုပျခဲ့, သူတို့, ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ထဲက, သင်နှင့်အတူပေါင်းဘော်, ဒါပေမဲ့ယုဒအမျိုး၏သမီးသင်၏အပြစ်သည်းခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့.
13:58 သို့ဖြစ်., ငါ့ထံသို့ကြေညာ, သငျသညျအတူတူစကားပွောသူတို့ကိုဖမ်းမိထားတဲ့သစ်ပင်အောက်။ "သူကဆိုပါတယ်, "တစ်ဦးအမြဲစိမ်းပိတ်ပင်သစ်ပင်လက်အောက်တွင်။ "
13:59 ဒံယလေကလညျး, "အမှန်ဆိုသည်ကား,, သင်သည်လည်းသင်၏ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းကိုဆန့်ကျင်လိမ်ညာခဲ့ကြ. သခင်ဘုရားကိုစောင့်၏ကောင်းကင်တမန်သည်, ဓားကိုင်ပြီး, အလယ်မှာသငျသညျကိုခုတ်လှဲခြင်းနှင့်သင်တို့ကိုကွပ်မျက်ရန်။ "
13:60 ထို့နောက်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ကျယ်သောအသံနှင့်အော်ဟစ်, သူတို့သညျဘုရားသခငျကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, အဘယ်သူသည်သူ့ကိုအတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့သူတွေကိုကယ်တင်.
13:61 ထိုသူတို့နှစ်ဦးကိုခန့်အပ်ထားသောအကွီးအကဲမြားတဘက်၌ထ, (ဒံယလေကသူတို့ကိုပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သောများအတွက်, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှုတ်ဖြင့်, မမှန်သောသက်သေကိုဆောင်သော၏,) သူတို့မတရားသူတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းတဘက်၌ပြုသမျှအတိုင်းသူတို့ကိုအားပြု,
13:62 မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သကဲ့သို့. ထိုသူတို့ကအသေခံစေခြင်းငှါထား, အပြစ်မဲ့သောအသွေးကိုထိုနေ့၌ကယ်တင်ခံခဲ့ရ.
13:63 သို့သော်ဟိလခိနှင့်သူ၏ဇနီးကသူတို့သမီးများအတွက်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, ဆူဆန်နာ, Joakim နှင့်အတူ, သူမ၏ခင်ပွန်း, လူအပေါင်းတို့သည်သူမ၏ဆွေမျိုးများ, သူမ၏အဘယ်သူမျှမအရှက်တကွဲအကျိုးရှိကိုတွေ့ခဲ့သောကြောင့်,.
13:64 ဒါဒံယလေသ နေ့မှစ. လူများရှေ့တော်၌အကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်၎င်းနောက်.
13:65 မင်းကြီး Astyages သည်သူ၏ဘိုးဘေးတို့နှင့်ကြွင်းထားကြ၏ခဲ့သည်. နှင့်ကုရုရှသူ၏နိုင်ငံကိုလက်ခံရရှိ.
14:1 ဒါဒံယေလရှင်ဘုရင်နှင့်အတူနေထိုင်နေတယ်, သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏မိတ်ဆွေများကအထက်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်.
14:2 အခုဆိုရင်ဗေလအမည်ရှိသောခါလဒဲနှင့်အတူရုပ်တုရှိ၏. အသီးအသီးနေ့ကသူ့ကိုမုန့်ညက်တကျိပ်နှစ်ပါးသောအလွန်ကြီးစွာသောအစီအမံအပေါ်အဲဒီမှာအသုံးခဲ့သည်, လေးဆယ်သိုး, နှင့်စပျစ်ရည်ခြောက်ရေယာဉ်များ.
14:3 ရှငျဘုရငျသညျလညျးသူ့ကိုကိုးကွယ်သူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့နေ့တိုင်းသွား၏, ဒါပေမယ့်ဒံယလေသသည်မိမိဘုရားသခင် adored. ထိုအခါရှင်ဘုရင်ထံတော်ကဆိုပါတယ်, "သင်အဘယ်ကြောင့်ဗေလကိုးကွယ်ကြဘူး?"
14:4 နှင့်ဖြေဆိုခြင်း, သူ့ကိုအားဆို၏, "ကျွန်မတို့လက်ဖြင့်လုပ်သောရုပ်တုဆင်းတုကိုမကိုးကွယ်ကြဘူးသောကြောင့်, ဒါပေမယ့်အသက်ရှင်သောဘုရား, အဘယ်သူသည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏, သူလူသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုကျော်အာဏာကိုရရှိထားသည်။ "
14:5 ထိုအခါရှင်ဘုရင်ထံတော်ကဆိုပါတယ်, "ဗေလတစ်လူနေမှုဘုရားဖြစ်ရန်သင့်အားမှမထင်ပါသလား? သငျသညျကိုသူနေ့တိုင်းစားများနှင့်အချိုရည်ဘယ်လောက်ကြည့်ရှုမနေပါနဲ့?"
14:6 ထိုအခါဒံယလေကဆိုပါတယ်, ပြုံး, "အိုမင်းကြီး, အမှားတစ်ခုလုပ်မရ, ဒီတစ်ခုအဘို့အပြင်ပပေါ်အတွင်းပိုင်းနှင့်ကြေးဝါအပေါ်ရွှံ့ဖြစ်ပါသည်, သူစားရတော့မှသိရသည်။ "
14:7 ထိုအခါရှင်ဘုရင်, အမျက်ထွက်ဖြစ်ခြင်း, ယဇ်ပုရောဟိတ်အဘို့ကိုခေါ်ကလညျး, "သင်ဤကုန်ကျစရိတ်ကိုစားတော်မူကြောင်းကိုသူသည်ငါ့ကိုပြောပြမထားဘူးဆိုရင်, သင်သေရလိမ့်မည်.
14:8 သင်တို့မူကားဗေလသည်ဤကိုစားတော်မူကြောင်းကိုပြသနိုင်လျှင်, ဒံယလေကလိုလား, သူ။ ဗေလဆန့်ကျင်ကဲ့ရဲ့ထားပါတယ် "ဒံယလေသညျရှငျဘုရငျအားမိန့်ရှိသောကြောင့်, "ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စကားလုံးအရသိရသည်ဖြစ်ပါစေ။ "
14:9 အခုဆိုရင်ဗေလ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ခုနစ်ဆယ်ခဲ့ကြသည်, သူတို့ရဲ့ဇနီးမှတပါး, နှင့်သူငယ်များ, နှင့်သား. ထိုအခါရှင်ဘုရင်ဗေလ၏ဗိမာန်တော်သို့ဒံယလေသနှငျ့အတူကွှ.
14:10 ထိုအဗေလ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ကပြောပါတယ်, "အကယ်, ကျနော်တို့ထွက်သွားကြသည်, ပြီးတော့သင်, အိုမင်းကြီး, အမဲသားကိုထွက်မသတ်မှတ်, နှင့်စပျစ်ရည်ကိုရောမွှေ, နှင့်တံခါးကိုပိတ်လိုက်, နှင့်သင့်လက်စွပ်နှင့်အတူကတံဆိပ်ခတ်ထား.
14:11 သငျတို့သညျနံနကျထဲသို့ဝငျသောအခါ, သငျသညျဗေလလုံးကိုကျွမ်းလောင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်, ကျွန်တော်အသေခံကိုခံရပါလိမ့်မယ်, သို့မဟုတ်အခြားဒံယလေသအလိုတော်, အဘယ်သူသည်ငါတို့တဘက်၌လိမ်ထားသည်။ "
14:12 သူတို့စားပွဲအောက်၌လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဝင်ပေါက်ကိုလုပ်သောကြောင့်ဒါပေမဲ့သူတို့မပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခဲ့, သူတို့ကအမြဲတမ်းသူကမှတဆင့် ဝင်. နှင့်ထိုအမှုအရာကိုကိုက်စား.
14:13 ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်, သူတို့သည်ထွက်သွားပြီးမှ, ရှင်ဘုရင်သည်ဗေလရှေ့တော်၌ထိုအစားအစာများကိုမသတ်မှတ်ကြောင်း, ဒံယေလသည်မိမိအစေခံကျွန်အားမှာထား, သူတို့ပြာကိုယူဆောင်, သူရှငျဘုရငျ၏ရှေ့တျော၌ဗိမာနျတျောတလျှောက်လုံးသူတို့ကိုသန့်စင်ပေးရမည်, နှင့်, သူတို့ထွက်ခွာအဖြစ်, သူတို့ကတံခါးကိုပိတ်, နှင့်ရှင်ဘုရင်ရဲ့လက်စွပ်နှင့်အတူကပိတျထားသောအပြီး, သူတို့သည်ထွက်သွား.
14:14 သို့သော်ယဇ်ပုရောဟိတ်ညဉ့်အခါထဲသို့ဝင်, သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုငျး, သူတို့ရဲ့ဇနီးနှင့်အတူ, နှင့်သူတို့သား, သူတို့ စား. အရာအားလုံးသောက်.
14:15 သို့သော်ရှင်ဘုရင်ကိုပထမဦးဆုံးအလင်းမှာသညျထ, ဒံယေလကိုယျတျောနှငျ့.
14:16 ထိုအခါရှင်ဘုရင်ကပြောပါတယ်, "အပြတ်အတောက်အဆိုပါဖျံ Are, ဒံယလေက?"ထိုအခါသူကဖြေကြား, "သူတို့ကအပြတ်အတောက်တွေဟာ, အိုမင်းကြီး။ "
14:17 ထိုသို့မကြာမီသူတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်အတိုင်း, ရှင်ဘုရင်သည်စားပွဲ၌ငေးကြည့်, နှင့်ကျယ်သောအသံနှင့်အော်ဟစ်, "ဂရိတ်သင်, အိုခေါ်ရန်, သင်နှင့်အတူမဆို, ပရိယာယ်မရှိ။ "
14:18 ဒံယလေရယ်, သူသည်ရှင်ဘုရင်ကိုပြန်ပို့ကျင်းပ, သူမဝင်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်ကြည့်ပါ, အဘယ်သူ၏ခြေရာဤအသိပေးစာ။ "
14:19 ထိုအခါရှင်ဘုရင်ကပြောပါတယ်, "ကျွန်မယောက်ျား၏ခြေရာကိုကြည့်ပါ, နှင့်အမျိုးသမီး, နှင့်ကလေးများ။ "ထိုအခါရှင်ဘုရင်အမျက်ထွက်ခဲ့သည်.
14:20 ထိုအခါသူသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖမ်းမိ, သူတို့ရဲ့ဇနီး, နှင့်သူတို့သား, သူတို့သညျကိုသူတို့စားပွဲပေါ်ပါသောအမှုအရာ ဝင်. ကိုလောင်ရာကနေတဆင့်လျှို့ဝှက်တံခါးများကိုပြသ.
14:21 ထို့ကြောင့်, ရှငျဘုရငျသညျသူတို့ကိုသတ်နဲ့ Daniel ၏တန်ခိုးသို့ဗေလကိုအပ်, အဘယ်သူသည်သူ့ကိုနှင့်ဗိမာန်တော်မှောက်.
14:22 ထိုအရပျ၌ကြီးစွာသောနဂါးရှိခဲ့, နှင့်ဗာဗုလုန်မြို့သားပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်.
14:23 ထိုအခါရှင်ဘုရင်ဒံယေလကပြောပါတယ်, "အကယ်, ယခုသင်ဤတစ်လူနေမှုဘုရားမဟုတ်ကြောင်းမပြောနိုင်ပါဘူး; ထိုကွောငျ့, သူ့ကိုကိုးကွယ်။ "
14:24 ဒံယလေကဆိုပါတယ်, "ငါသည်သခင်ဘုရားကိုးကွယ်, ဘုရားရေ, သူအသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်ဘို့. သို့သော်တဦးတည်းအသက်ရှင်သောသတ္တဝါဘုရားမဟုတ်ပါဘူး.
14:25 ထို့ကြောင့်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုပါဝါပေး, အိုမင်းကြီး, ငါ။ ဓားကိုသို့မဟုတ်ကလပ်မရှိဘဲဤနဂါးစီရင်မည် "ထိုအခါရှင်ဘုရင်ကပြောပါတယ်, "ငါအမှနျအားပေးရမည်။ "
14:26 ဒါဒံယလေကအစေးကိုယူ, နှင့်အဆီ, နှင့်ဆံပင်, အတူတူသူတို့ကိုချက်ပြုတ်. ထိုမင်းသည်ဖု လုပ်. နဂါးရဲ့ပါးစပ်သို့သူတို့ကိုငါထား, နှင့်နဂါးပွင့်လင်းပြင်းစွာတိုက်. နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "အကယ်, ဤသူသည်သင်တို့ကိုကိုးကှယျသောအရာကိုဖြစ်၏။ "
14:27 ဗာဗုလုန်မြို့သားထိုစကားကိုကြားပြီးမှ, သူတို့သည်အလွန်ဒေါသစိတ်ရှိသည် ဖြစ်.. ထိုအခါရှင်ဘုရင်ဆန့်ကျင်အတူတူစုဆောင်း, သူတို့ကဆိုပါတယ်, "ရှင်ဘုရင်သည်ယုဒလူဖွစျနပွေီ. သူကဗေလကိုဖကျြဆီးထားပါတယ်, သူသည်နဂါးကွပ်မျက်ခံရထားပါတယ်, သူသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုသတ်လိုက်ပါတယ်။ "
14:28 ထိုသူတို့ကရှင်ဘုရင်ထံသို့ရောက်သည့်အခါ, သူတို့ကဆိုပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့ကိုဒံယေလကယ်ယူ, မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်သင်နှင့်သင့်အိမ်သူအိမ်သား execute လိမ့်မည်။ "
14:29 အရှင်မင်းကြီးသည်သူတို့ပြင်းထန်စွာသူ့ကိုဖိအားပေးကြောင်းကိုသိမြင်, ဆိုတော့, လိုအပ်မှုအနိုင်အထက်ခံရ, သူကသူတို့ကိုဒံယေလကိုအပ်.
14:30 ထိုသူတို့ကခြင်္သေ့တှငျးထဲသို့ချပစ်လှောင်, သူသည်ခြောက်ရက်ပတ်လုံးဖြစ်လေ၏.
14:31 ထို့အပွငျ, တှငျး၌ခုနစ်ခြင်္သေ့ရှိခဲ့သည်, သူတို့နေ့တိုင်းသူတို့ကိုနှစ်ခုအသေကောင်အားပေးခဲ့, နှစ်ယောက်သိုး, ထိုအခါမူကား၎င်းတို့သည်ထိုသူတို့အားမပေးခဲ့ကြ, ဒံယေလကိုသူတို့ကိုက်စားခြင်းမယ်လို့ဒါ.
14:32 အခုတော့ဟဗက်ကုတျဟုချေါသညျပရောဖကျယုဒပြည်၌ရှိ၏, သူငယ်လေးတစ်မုန့်ညက်ချက်ပြုတ်ခဲ့ကြပြီးပန်းကန်ထဲမှာမုန့်ကျိုးပဲ့ခဲ့, သူလယ်သို့သွားခဲ့သည်, စပါးရိတ်ဖို့ကရောက်စေဖို့.
14:33 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဟဗက်ကုတျအားဆို၏, "ဗာဗုလုန်မြို့သို့သငျသညျရှိသည်သောမုန့်ညက်ယူသွား, ဒံယေလ, ခြင်္သေ့ '' တွင်းထဲကသူကိုပါပဲ။ "
14:34 ထိုအဟဗက်ကုတျကပြောပါတယ်, "သခင်, ငါသည်ဗာဗုလုန်မြင်ကြပြီမဟုတ်, ငါတှငျးမသိရပါဘူး။ "
14:35 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်မိမိခေါင်းကိုထိပ်ကသူ့အားဖမ်းဆီးရမိ, သူ၏ခေါင်း၏ဆံပင်များကသူ့ကိုသယ်ဆောင်, နှင့်ဗာဗုလုန်မြို့၌သူ့ကိုသတ်မှတ်ထား, တှငျးကျော်, သူ၏ဝိညာဉ်၏အင်အားအားဖြင့်.
14:36 ထိုအဟဗက်ကုတျကွှေးကျွော, ဟုဆို, "ဒံယလေ, ဘုရားသခင်၏ကျွန်သည်, ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုစလှေတျသောညစာယူပါ။ "
14:37 ဒံယလေကဆိုပါတယ်, "သင်ငါ့ကိုနျုအောကျမေ့, အိုဘုရားသခင်, သင်ကိုချစ်သောသူတို့အားသာစွန့်ပစ်ကြပြီမဟုတ်။ "
14:38 ဒံယလေထစားရကြ၏. ပြီးတော့သခင်ဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ချက်ချင်းသူ၏နေရာကိုမှဟဗက်ကုတျပြန်ရောက်.
14:39 ဆိုတော့, ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌, ရှငျဘုရငျသ + မနက်ဒံယလေသဆီသို့ရောက် လာ. ,. သူသည်ထိုအတွင်းဆီသို့ရောက် လာ. ,, နှင့်စိုက်ကြည့်, အကယ်စင်စစ်, ဒံယေလကိုခြင်္သေ့၏အလယ်၌ထိုင်နေစဉ်.
14:40 ထိုအခါရှင်ဘုရင်ကျယ်သောအသံနှင့်အော်ဟစ်, ဟုဆို, "ဂရိတ်သင်, အိုထာဝရဘုရား, အဆိုပါဒံယေလဘုရားသခငျသညျ။ "သူသည်ထိုခြင်္သေ့ '' တွင်းထဲကသူ့ကိုဆွဲထုတ်.
14:41 ထို့အပွငျ, မိမိအပျက်စီးခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုခဲ့တဲ့သူတွေကို, သူတှငျးသို့လှဲချ, သူတို့ရှေ့တော်၌တခဏအတွင်းကိုက်စားခဲ့ကြ.
14:42 ထိုအခါရှင်ဘုရင်ကပြောပါတယ်, "မြေတပြင်လုံးမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုဒံယေလဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြစို့. သူကကယ်တင်ရှင်သည်, မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအရိပ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဖှယျအမှုအလုပ်လုပ်ကိုင်, သူခြင်္သေ့ '' တွင်းကနေဒံယလေကလွတ်မြောက်လာပါပြီ။ "